သီရိရယ် - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသားသူ – ??????
“အော် သူ့အကောင့်လေး မီးစိမ်းနေပါလား”
ဖုန်းလေးကို ကိုင်ပြီး Facebook လေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ သီရီအကောင့်လေး မီးလေးစိမ်းနေတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှလည်း နှုတ်မဆက်ရဲတဲ့ ဘဝ။
“သီရိရေ ကိုယ့်မှာသာ ကိုယ့်အပြစ်နှင့် ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ တို့နှစ်ယောက်ချစ်ခြင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ ဇီဇာကြောင်မှုကြောင့် တို့တွေ ဝေးခဲ့ကြရတာ မဟုတ်လားလေ။ အားလုံး ကိုယ့်အပြစ်တွေပါကွာ”
လို့ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့လေးတွေးရင်း အတိတ်ကို ဇော်မိုး တစ်ယောက် တမ်းတပြီး မဆုံနိုင်တဲ့ ဘဝမို့ ဆွေးနေရတယ်လေ။
ကျနော်.. ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကလိုလ် lecture therater တည်ဆောက်ရေးမှာ အန်ဂျင်နီယာကန်ထရိုက်တာ အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ကနေပြီး အလုပ်သွားရတာလေ။ ကားမောင်းပြီးပေါ့။ ဖောင်ဒေးရှင်းလေး စတင်နေခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ပုံစံတွေက မတည်မငြိမ်၊ အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး ဖြစ်နေတာကြောင့် မူလဒီဇိုင်းအတိုင်း လုပ်ထားရကနေ ပုံစံပြောင်းတဲ့အတွက် ပေါက်ကွဲနေတဲ့အချိန် ကားကို မြန်မြန်လေး မောင်းလာခဲ့တယ်။
သံလျှင်ဘက်ကမ်းရောက်တော့ လမ်းရှင်းပါတယ်ဆိုပြီး အရှိန်တင်လိုက်တယ်။ လူက ကိုယ့်အတွေးနှင့် ကိုယ်ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်အားဘူးဗျ။ လမ်းသွယ်လေးကနေ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး အတင်းထွက်လာတယ်။ ကားရှေ့အထိရောက်လာတာကြောင့် “ကျွီ..ဟီ..ဟီ..ကျွီ” ကားဘရိတ်ကိုအတင်းဖမ်းနင်းရင်း ဒေါသထောင်းကနဲ ထွက်သွားတယ်။ မတိုက်မိပေမယ့် ဆိုင်ကယ်ကလဲတယ်။ လဲသာလဲသာ သောက်ခလေးမက လက်ထဲက ရေခဲချောင်းကို မလွှတ်ဘူး။
သိတဲ့အတိုင်း အလုပ်ထဲမှာ ဆဲနေကျ ပုံစံအတိုင်း အယုတ်တ အနတ္တတွေ ထွက်သွားတယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဆိုင်ကယ်ကိုထူရင်း ကြည့်လိုက်ကာ
“ဟေ့ကောင်မလေး.. ဒါကား ကား ဟဲ့…. ကားတိုက်ရင် သေတတ်တယ် နားလည်လား၊ နင်လင်မလိုချင်တော့ဘူးလား”
“အံမာ တိုက်ချင် တိုက်ပလိုက်၊ လင်မလိုချင်တော့ဘူးလား ဘာလာနဲ့”
ကျနော်လည်း အဲဒီအခါမှ သတိထားမိတယ်၊ ကောင်မလေးက မျက်ကြောတင်းလေး ဆေးဆိုးဆံပင်လေးနှင့်။ ရုပ်လေးက ချစ်စရာလေးပါ။ တော်တော်လေးလည်း လှတယ်။ သူ့အရပ်နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ အလှအပ အဖုအထစ်တွေက ရင်ခုန်စရာကြီးပေါ့။ ရင်ထဲမှာ ရေခဲမြစ်လေးစီးဆင်းသွားတယ်။ သိပ်ချစ်သွားပြီခေးရယ်။
“အဲဒီလိုပါ လင်ယူမယ်ဆို ငါ့ကို စဉ်းစားပေးပါလို့”
“အမ် မသာကြီး..ရုပ်ကဖြင့် သင်းချိုင်းကို ခြေတလှမ်းနေပြီ ငါခဲနှင့် ကောက်ထုလိုက်ရ”
ကောင်မလေးက ပါးစပ်ကလည်းပြောရင်း ခဲကောက်ကိုင်လို့ ကျနော် ကားပေါ်တက်ပြီး အတင်းမောင်းပြေးရတော့တယ်။
“ဟိုက် မလွယ်ကြော ဇတ်ဇတ်ကြဲလေး”
ကျနော်.. အဲဇတ်ဇတ်ကြဲလေးကို ခိုက်သွားတယ်။ အင်း.. အသက်ကလည်း ခြောက်နှစ်လောက်ကွာမယ့် သဘောရှိတယ်။ ဒီလိုအလန်းလေးက ငါလိုလူကို ဘယ်ကြိုက်မလဲကွာ.. ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့အချစ်ကို ရဖို့ ငါ့သိက္ခာတွေ မာနတွေကို ခဝါချရမှာပဲလေ။ ချစ်တော့လည်း လူငယ်စတိုင် ဖမ်းရမှာပေါ့။
နောက်နေ့ အဲဆော်ကို အဲဒီနေရာလေးမှာပဲ ကြိုစောင့်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ အဟဲ နဖူးစာ ရွာလယ်ပြီ။ ရန်ကုန်သားနှင့် သံလျင်သူ၊ အဟီး..မိုက်တယ်။
အော်.. ငါတော့ ရှင်မွေ့လွန်းနှင့်တော့ တွေ့ပြီ။ အင်း.. အဆင်ပြေအောင်ပဲ လုပ်ရမယ်၊ ငါ့အသက်က မိန်းမယူရမယ့် အရွယ်ရောက်နေပြီပဲ။ စိတ်ကူးနှင့် ရူးပေါ့ဗျာ။
သီရိတစ်ယောက် ပေါက်ကွဲနေတယ်။ မနက်က ရေခဲချောင်းလေးဝယ်ပြီး ဆိုင်ကယ် လက်တဖက်နှင့် ထိန်းစီးပြီး လမ်းသွယ်က လမ်းမကြီးပေါ်တက်တော့ အရှိန်နည်းနည်းလွန်ပြီး သူများလမ်းကြောပေါ် ရောက်သွားတာ။ ရန်ကုန်ဘက်ကလာတဲ့ ကားနှင့်တိုက်မိတော့မလို့။ လဲသွားတာ လူကို မထူပဲ ဆိုင်ကယ်ကို ထူတယ်။
ပြီးတော့ သောက်အားမနာလည်း ပြောသေးတယ်။ ဘာတဲ့ လင်မလိုချင်ဘူးလားတဲ့။ သူ့အပူကျနေတာပဲ။ ပြီးတော့လည်း ရိသဲ့သဲ့ ရည်းစား စကားပြောသေးတယ်။ လူကဘဲ အိုဘဲနာကြီး ဖြစ်နေပြီ။ ဒီကမှ ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတာ။ အားမနာ လျှာမကျိုး ပြောတယ်။ စိတ်တိုပြီး ခဲနှင့်ထုမလို့။
“ခွေးသားကြီး တွေ့ရင်တော့ ဟင်းးးဟင်းး”
ဒေါသစိတ်လေး လျှော့လိုက်ပြီးမှ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တယ်။ အသက်သာကြီးတာပါ။ ရုပ်က မဆိုးဘူးပဲ။
“အံမယ် သူ့တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ရေမွေးနံတွေနှင့် မွေးနေတာပဲ။ ရေမွေးပုလင်းများ ဖိတ်ကျလာခဲ့သလားလမသိဘူး။ အာ..ငါဘာတွေ တွေးမိနေတာလဲ”
ဆတ်ဆတ်ကြဲလေး သီရိရင်ထဲ အတွေးတစ်ချက် ခဏတာလေး ဝင်သွားတော့။ သီရိတစ်ယောက် ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးမိသွားတယ်။ သီရိလည်း ကျောင်းတက်ဖို့အတွက် ဆိုင်ကယ်ကို ကျောင်းဘက်ဦးတည်ထွက်လိုက်တယ်။
ကျောင်းဘက်ရောက်ပြီး ကျနော်လည်း အလုပ်များနေတာကြောင့် ဘယ်မှမထွက်ပဲ အလုပ်အတွက် စီစဉ်ပေးနေရပေမယ့် ခုနတုန်းက လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ကောင်မလေးက အတွေးထဲမှာ စိုးမိုးနေတာကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြုံးမိတယ်။ ဆယ်လီနာဂိုမက်လို လှတဲ့ ကောင်မလေးရယ် မင်းဆီမှာလဲလေ။
နေ့လည် ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ ကန်တင်းဘက်ကို သွားလိုက်တယ်။ ဆိုင်ကလည်း ရင်နီးနေပြီ။ ဆိုင်ရှင် မချယ်ရီက ခါတိုင်းဆို ကျနော်ကနောက်ကျပြီးမှ လာလေ့ရှိတော့ အံဩနေတယ်။
ဆိုင်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ များနေလို့ လက်မလယ်ဘူး။ ကျနော်လည်း ဆိုင်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ ဟားးးး ဟိုကောင်မလေး၊ ကြည့်စမ်း ဝေးဝေးရှာစရာ မလိုဘူး ဒီကျောင်းကပဲ၊ နဖူးစာမှန်တော့ တွေ့ရပြီပေါ့။
“ထမင်းပေါင်းတစ်ပွဲ လာချ၊ ပြီးတော့ သံပုရည်တစ်ခွက်”
အောသူမှာပြီ ငါဂွင်ဖန်ပြီး အနားကပ်လိုက်ဦးမယ်။
“အကြော်ဆရာ ထမင်းပေါင်း မြန်မြန်လုပ်ကွာ”
“မဟုတ်ဘူး ဟိုဆော်လေးလေ သူမှာတာ”
“အော် မသီရိလား။ မင်းသိလို့လား”
ကျနော်လည်း ထမင်းပေါင်း ပန်းကန်ယူကာ သီရိအနားကိုသွားပြီး
သီရိ မော့ကြည့်တော့ ရင်တောင် ခုန်သွားတယ်။
“ဟာ… ဘဲရီး စားပွဲထိုးလား”
သီရီ သဘောကျသွားတယ် လက်စားချေခွင့် ရပြီ။
ကျနော် ရေနွေးအိုး ချပေးလိုက်တယ်။
“ဟင်.. ဇွန်းတွေက မသန့်ဘူး”
“ပေးပါ.. ကျနော် ရေနွေးစိမ်ပေးမယ်”
ရေနွေးစိမ်ပေးပြီး ဇွန်းခက်ရင်း ဆေးပေးလိုက်တယ်။ စားပွဲခုံက ညစ်ပတ်နေတယ်။ သုတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့အနား မထိတထိလေး ကပ်ပြီး သုတ်ပေးလိုက်တာ။
“ဟေ့လူ.. ဘာလို့ အနားကပ်တာတုန်း”
“အဲ သေသေချာချာ ကြည့်ချင်လို့ပါ”
“အော် မောင်လေး ဇော်မိုး.. အားနာလိုက်တာကွယ်၊ သီရိ ညီမလေး သံပုရာရည် သောက်ဦးမလား”
ကျနော်လည်း မချယ်ရီ အနားရောက်လို့ ဆက်စကားမပြောပဲ ခွာလိုက်တယ်။ မချယ်ရီနှင့် သီရိတို့စကားပြောနေတယ်။ မချယ်ရီက ကျနော့်ဘက်လှည့်ကြည့်ပြီး အားတုံ့အားနာ ဖြစ်နေပုံပဲ။ သူကတော့ ပြုံးစိစိနှင့်… အင်းး သီရိရယ် မင်းငါ့ကိုပြုစားနိုင်တယ်ကွယ်။
ညနေ သုံးနာရီလောက် အလုပ်ကနေ ပြန်ခဲ့တယ်။ ဘုရားကုန်းကျော်ပြီး ကျိုက်ခေါက်အလွန်မှာ သီရိကိုဆိုင်ကယ်တွန်းရင်း လမ်းမှာတွေ့တယ်။
“ဟာတစ်ခါတည်း ဘဲ အဖြစ် ခေါ်လိုက်တာလား”
“မလိုဘူး.. ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပဲ၊ ရှင်တို့ယောက်ျားလေးတွေက နည်းနည်းကူညီမယ်၊ ခင်ချင်တယ် ပြောမယ်၊ ပြီးရင် ရည်းစားစကားပြောမယ် မသိတာကျလို့”
“အောသီရိက ကြိုသိပြီးပြီပဲ.. အဖြေပေးဖို့ စဉ်းစားတော့”
“ပေးပါ ဆိုင်ကယ်၊ ရော့ ကားသော့ ကားပေါ်နေခဲ့ ဆိုင်ကယ် သွားပြင်လာခဲ့မယ်”
ကျနော် ကားသော့ အတင်းပေးပြီး ဆိုင်ကယ်ကို တွန်းလာခဲ့တယ်။ ဆယ့်ရှစ်ကုန်းမှာ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်မရှိတော့ အောင်ချမ်းသာအထိ တွန်းလာခဲ့တယ်။ မောမှန်းတောင် မသိဘူး၊ အချစ်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါက်ဖွားနေလို့ပေါ့ဗျာ။
ကားသော့လေးပေးပြီး ဆိုင်ကယ်တွန်းကာ ထွက်သွားသော ကိုဇော်မိုးကို သီရိ သနားသွားမိတယ်။ စိတ်ထဲလည်း ကြည်နူးမိတယ်။ သူ့အပေါ် တကယ်ဂရုစိုက်သော လူတစ်ယောက်၊ ချစ်သောသူတစ်ယောက်ကို တွေ့ရတဲ့ အတွက်လည်း ဖြစ်တယ်။
သီရိစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး သူတပါးကို ကူညီတတ်သော ဘဲရီးကို လေးစားသွားတယ်။ ဘဲရီးကတော့ သီရိအပေါ် တရားဝင် ချစ်ခွင့်ပန်လာမှာကိုလည်း တွေးမိတယ်။ အဲလိုဆိုရင်လည်း ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်လောက် သည်းခံနိုင်မလဲ စမ်းသတ်ဖို့ စဉ်းစားမိပြီး မိမိအဖြစ်ကို ရယ်ချင်နေမိတော့တယ်။
ကျနော်လည်း ဘီးဖာပြီး ဆိုင်ကယ်စီးကာ သီရိဆီလာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သီရိကို သော့လှမ်းပေးရင်း
“သီရိရော့ သော့.. ကလေးတွေကို စာသင်ရဦးမယ် မဟုတ်လား”
“သီရိ ဆယ်တန်း ကလေးတွေကို Guide လုပ်နေတယ်မလား သွားတော့ ဆိုင်ကယ် တွန်းထားတာ ချွေးတွေနဲ့.. ရေလေးဘာလေး ချိုးပြီးမှ သွား၊ မဟုတ်ရင် ကလေးတွေ မူးလဲသွားမယ်”
“ရုပ်ကလေးက လှရက်သားနဲ့ လူက ညစ်ပတ်လို့ပါ”
“ဟဲ..ဟဲ အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ရေမချိုးဖြစ်ဘူးဆို”
“သွားတော့လေ သီရိ မနက်မှ ကိုစောင့်နေမယ်”
သီရိ လန့်တောင် လန့်လာတယ်၊ ဒီလူကြီးက သီရိအကြောင်း သိနေလို့လေ၊ သီရိ ရယ်ချင်သွားတယ်၊ စိတ်ထဲမှာလည်း တွေဝေသွားတယ်၊ ဘဲရီးနှင့်တွေ့တော့ သီရိစိတ်ထဲ ဘဲရီးက စိုးမိုးပြီး နေတာလေ။
ညနေ ကလေးတွေနှင့် စာသင်နေရင်း ပြုံးမိတယ်။ ညလည်း အိပ်မပျော်ဘူး မနက် ရောက်တော့ စောစောလေး ထလိုက်တယ်။ ရေမိုးချိုးပြီး အလှပြင်ရာက ရယ်ချင်နေတယ်။ ဘဲရီးကိုလည်း တွေ့ချင်တယ်။
“လူဆိုးကြီး တဖြေးဖြေးနှင့် သီရိ စိတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်တယ် ဟင်းး”
အဲဒါနှင့် ဆိုင်ကယ်လေး ထုတ်ပြီးစီးကာ လမ်းထိပ်ကိုထွက်တယ်၊ လမ်းထိပ် ဝဲယာကြည့်တော့ ဘဲရီးကားကို တွေ့တယ်။ လမ်းထိပ်ဆိုတော့ သီရိ ရှက်သွားတယ်။ မတော်တဆ အိမ်က လူတွေနှင့်တွေ့ရင် အရှက်ကွဲမှာမို့ ခေါင်းငုံပြီး ဆိုင်ကယ် အတင်းမောင်းထွက်ပြီး ကျောင်းကို လာခဲ့လိုက်တယ်။ စောစောရောက်တော့ ယောင်ချာချာနှင့်လေ။
ကျနော်လည်း ကျနော့်ရှေ့က ဆိုင်ကယ်အတင်းမောင်းသွားတဲ သီရီနောက်က လိုက်ခဲ့တယ်။ သီရိနောက်က ကားရပ်ပြီး
“သီရိ.. တစ်ခုခု စားရအောင်”
ကျနော် ကန်တင်းဘက်ကို လမ်းလျှောက်ရင်းကနေ သီရိကို ကြည့်တော့ သီရီက ခေါင်းငုံကာ စဉ်းစားနေတယ်။
“သီရိ.. ကိုယ်မင်းကို ချစ်တယ်”
“ရှင်…ဘဲရီး၊ အဲလိုပြောဖို့ မစောလွန်းဘူးလား”
“မစောဘူး.. မင်းအနားမှာရှိတဲ့၊ ချစ်ရင်ထူး၊ မဟူရာနှင့် ဟိုဘဲလေးတွေရဲ့ ခေါတော တစ်ထောင်နှင့်ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေက စိုးရိမ်စရာ ကောင်းလို့ပါ”
“အမ်.. သူတို့က နှာဘူး အကြည့်နှင့် ကြည့်တယ်ပေါ့.. ဘဲရီးက ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ”
“အဲဒါဆို ဘဲရီးလည်း နှာဘူးပေါ့”
“မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်က အချစ်စွမ်းရည်နှင့် ကြည့်တာပါ”
“ဘဲရီးက လိပ်မျိုးပဲ သိပ်သိတတ်တယ်”
“သီရိ ကိုယ့်ကို အဖြေပေးဦလေ”
“ချက်ချင်း ဘယ်ပေးမလဲ စောင့်ပေါ့”
ဒီလိုနှင့် ကန်တင်းထဲ ရောက်တော့ စားစရာ မှာလိုက်တယ်။ ကျနော်က ကော်ဖီ၊ သူက လက်ဘက်ရည်တဲ့။ ကျနော်လည်း အကြိုက်တူအောင် လက်ဖက်ရည် မှာရတယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းတော့လည်း သူက အရှင်းမခံဘူး၊ သူ့စားတာ သူသောက်တာ သူ့ဟာသူ ရှင်းသွားပြီး၊ ကျနော်ကို ထားကာ ကျောင်းထဲကို သွားတယ်။ သူ့မာနကို လုံးဝအထိမခံတဲ့မိန်းကလေးပါဗျာ။
သီရိတစ်ယောက် ရင်ထဲမှာ တွေဝေခဲ့ရပြီ။ ရည်မှန်းချက်တွေ တလှေကြီးနှင့် နေလာခဲ့တာ။ ကိုဇော်မိုးရဲ့ အကြင်နာ ချစ်ခြင်းက သူအပေါ် လွှမ်းမိုးခဲ့ရပြီ။ ဘယ်သူခံနိုင်မလဲလေ ကိုယ့်လောက် ဂျစ်ကျနေသူတစ်ယောက် သိသိကြီးနှင့် ဆိုးတဲ့သူအပေါ် သည်းခံစိတ်တွေ မွေးပြီး ကိုယ့်ပေးမဲ့ မေတ္တာတရားကို စောင့်မျော်နေသူ အပေါ်မှာ နှလုံးသားက ချစ်ခွင့်ပေးလိုက်မိပြီ။
ကိုဇော်မိုး အပေါ်မှာ ချစ်မိပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ် ထိပါးလာမှာလည်း စိုးတယ်။ လောကဓံတရားကို အံတုပြီး ရွဲ့တတ်တဲ့ သီရိရဲ့ အပြုအမူတွေကို ကိုဇော်မိုး နားလည်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။
နောင်အပတ်တွေမှာလည်း ဇော်မိုးဟာ သီရိနှင့် အမြဲတွေ့တယ်။ သီရိ ဆိုးနွဲ့တာ ခံရင်းနှင့်ပဲ
“သီရိ ကို သီရိလေးကို ချစ်တယ်ကွာ.. သီရိသဘောထားလေး သိပါရစေတော့”
“သီရိ ကန့်ကွက်စရာ မရှိဘူး ကိုကို”
“ကိုယ့်ကို ကိုကိုလို့ ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် သီရိ’”
ကျနော် နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ အားမလို အားမရ ဖြစ်လာလို့။
“ဟေးးးးး ပျော်တယ်ဟေ့.. ဟားးးဟားးးးဟားးးး”
“ဟာ ကိုကို ဘာတွေဖြစ်နေလဲ”
“ဒီမှာ ကိုကို ဒါမျိုးက ရိုးနေပြီ၊ ပထမ ဘုရားသွားမယ်၊ ဒုတိယ ပန်းခြံသွားမယ်၊ ပြီးရင် ဟိုတယ်ကိုခေါ်အုံးမှာ မဟုတ်ဘူးမလား”
“ဟာ သီရိကလည်းကွာ အဲလို မဟုတ်ပါဘူး”
“ဘာမဟုတ်ရမှာလည်း ကိုကို၊ အဲဒါ ယောက်ျားလေးတွေ လုပ်နေတဲ့ သီအိုရီပဲလေ”
“အင်း သီရိမှတ်ထားနော်… ကိုကိုက သီရိကို ဘယ်တော့မှ ဟိုတယ် မခေါ်ဘူး”
“သီရိက ဟိုတယ်ပဲ သွားချင်တာ”
“ကိုကို ပိုက်ဆံမရှိလို့ မဟုတ်လား”
“ဘာ.. မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် တစ်လလောက် ဟိုတယ်မှာ ဟန်းနီးမွန်း လုပ်ပစ်မှာ.. သီရိကို မနားစေရဘူး”
“ဟားးးးး ဟားး မကြောက်ပါနှင့် သီရိရယ်”
“သီရိ ကို့ကို ချစ်တယ်ပြောလေ”
ကျနော်လည်း သီရိကိုဖက်ပြီး သီရိရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို နမ်းလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ကျနော့် အနမ်းတွေကို ပြန်တုန့်ပြန်ပြီး နမ်းတယ်ဗျ။ အချစ်ကိုတွေ့ရတော့ ရင်ခုန်သံချင်းပါ နီးစပ်ခဲ့ပြီလေ။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အမြဲပဲ တွေ့ချင်တယ်။ တွေ့ရင်လည်း သီရိက ဘာပစ္စည်း လက်ဆောင်ပေးပေး လက်မခံဘူးဗျ။ အစားအသောက် စားရင်တောင် တစ်ယောက်တလည့် အကုန်ခံခိုင်းတယ်။ ကျနော် ဘယ်လို မြိုကျမှာလည်းဗျာ။
သူ့မှာ ကလေးတွေ ကျူရှင်ပြရင်း ပိုက်ဆံရှာတယ်။ ဘဝအတွက်ဆိုပြီး သင်တန်းတွေ တက်တယ်။ ကျနော်သူ့ကို စိတ်မချတော့ဘူး၊ သူ့မှာလည်း ယောကျ်ားလေး သူငယ်ချင်းတွေက အများသား။ သိတဲ့အတိုင်း မစားရ အညှော်ခံ။ အနံ့ရှူနေတဲ့ ချစ်ရင်ထူးနှင့် မဟူရာတို့ ရှိတယ်။ ဖုန်းတွေ ပြောတယ်။ သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုပြီး ပိတ်ပင်လို့က မရဘူး။ ကျနော်သီရိကို အပိုင်ချည်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ လုံးဝ လက်မခံဘူး။
“ကိုကို သီရိကို ချစ်ရင် အဲလို မလုပ်နဲ့တဲ့ဗျာ”
ကျနော် အကြံအစည်တွေ ထုတ်နေတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနှင့် ချစ်သူသက်တမ်း သုံးလပြည့်တဲ့အခါ ကျနော်အလုပ်တွေလည်း ပြီးပြီမို့လို့ ကျနော် သီရိတို့ ကျောင်းကို မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ သင်တန်းတက်ချိန် မနက်ပိုင်းတော့ တွေ့ခွင့်ရတယ်။ နှစ်ယောက်သား ခဏတော့ စကားပြောဖြစ်တယ်လေ။ နီးနေတဲ့အချိန် သိပ်မသိသာပေမယ့် ကျနော် တစ်လလောက် ခရီးထွက်ရတဲ့အခါ အရမ်းလွမ်းလာတယ်။ သီရိလည်း ကျနော်လိုပဲ လွမ်းနေတယ်လေ။ ပြန်ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်ပြောထားလို့ ကျနော် သီရိဆီကို ဖုန်းဆက်တယ်။
“ခလေးလေး ကိုကို ပြန်ရောက်ပြီ”
“လာချင်တယ်ကွာ ကိုကို အရမ်းလွမ်းနေပြီ”
“သီရိလဲ အရမ်းလွမ်းနေတယ် ကိုကို၊ သီရိဆီ လာခဲ့ပါကွာ”
“ကိုကို နေမကောင်းဘူး သီရိရယ်”
“ဟင် ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုကို၊ သီရိ လာခဲ့မယ်လေ”
ကျနော် ဝမ်းသာသွားတယ်။ အိမ်မှာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းလေ။ သီရိလာရင် ကျနော်.. ချစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အကြံအစည်တွေ လုပ်လိုက်တယ်။ ပဲမြစ် မဟုတ်ကြောင်း သီရိ သိသွားစေရမယ်လေ။
ကျနော် သီရိကို ဖက်ပြီး နမ်းလိုက်တယ်။
“အာ….ကိုကို အိမ်မှာ လူမရှိဘူးလား”
“ဟော့တော့… ဘာလို့ လိမ်ခေါ်တာလဲ နေမကောင်းဘူးဆိုပြီး”
“သီရိလည်း လွမ်းတယ် ကိုကို… ဒါပေမယ့်………”
“သီရိရယ် ကိုကို သီရိကို အရမ်းချစ်တာလေ”
“သီရိ သိပါတယ် ကိုကိုရယ်၊ သီရိလေ အပျိုစင်ဘဝကို ဒီလိုကြီး…”
ကျနော် သီရိနှုတ်ခမ်းကို လက်ညှိုးလေးနှင့် ပိတ်လိုက်တယ်။
“သီရိရယ် ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ချစ်သူဘဝမှာ ဒီလိုပဲချစ်ကြတာပဲလေ၊ ကိုကို သီရိကို လက်ထပ်ယူမှာပါ.. ကိုကို သီရိအပေါ်မှာ တသက်လုံး သစ္စာရှိရှိ ပေါင်းသင်းမှာပါ သီရိရယ်”
“နောက်ကျမှ သီရိကို ပစ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သီရိက ဂရုမစိုက်ဘူး”
“ကိုကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လွန်းလို့ပါ သီရိရယ်”
ကျနော်လည်း သီရိခါးကို ကျစ်နေအောင် ဖက်ရင်း သီရိမျက်နှာအနှံ့ အနမ်းမိုးတွေ ရွာချလိုက်တယ်။ တအိမ်ထဲ နှစ်ယောက်တည်းသာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိက ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လုံးကို စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားစေတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးလည်း ဖြစ်တော့ လူမရှိတဲ့ နေရာမှာဖြစ်တော့ သီရိရော ကျနောရော ကာမစိတ်ကို ထိမ်းချုပ်လို့ မရတော့ဘူးလေ။
ကျနော် သီရီနှုတ်ခမ်းသားလေးကို နမ်းလိုက်တယ်။ သိရီလည်း ရမက်ခိုးတွေ ဝေလာပြီလေ။ မျက်တောင်လေးစင်ပြီး ကျနော့် အကြင်နာတွေကို မျော်လင့်နေပြီလေ။ ကျနော်သီရိကို အနမ်းလေးပေးရင်း သီရိအင်္ကျီလေးကို အပေါ် မချွတ်လိုက်တယ်။ သီရိရဲ့ စနေနှစ်ခိုင်ပေါ့ဗျာ လှလိုက်တာ။
နေရောင်မထိဘဲ ဖွင့်ထွားချက် ဖြူဖွေးနေတာပဲ၊ ရင်သားတွေက ဘရာအပေါ်မှာ ထွက်လုဆဲဆဲပေါ့။ ကျနော်လည်း ဘရာချိတ်ကိုဖြုတ်ပြီး သီရိနို့တွေကို ကြည့်မိတယ်။ စိတ်တွေ ထန်နေတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေစူပြီး ချွန်ထွက်နေတယ်၊၊ ပန်းရောင်သမ်းတဲ့ နို့သီးခေါင်းနှင့် ဝန်းရံထားတဲ့ နိုးဝန်းလေးတွေက ချစ်စရာ အလွန်ကောင်းနေလို့ ကျနော်လည်း ရေငတ်နေသူပမာ တပြွတ်ပြွတ် အငမ်းမရ စို့လိုက်တယ်။
“အားးးကိုကို.. အားးးးဖြေးဖြေးစို့ပါ ကိုရယ်”
“ကို အားရပါးရ စို့ပါရစေ သီရိရယ်”
“အင်းပါ ကိုကိုရယ်.. သီရိက ကိုကိုပြုသမျှ ခံရတော့မှာပဲလေ”
“အဲလို သဘောမထားနဲ့လေ ချစ်ရာ၊ ချစ်ကြပြီဆိုမှတော့ စိတ်တူကိုယ်တူ ချစ်ချင်တာ”
“အင်းပါ ကိုကို၊ ကိုကို စိတ်တိုင်းကျသာ ချစ်ပါ၊ သီရိ ခံပါ့မယ်”
“သီရိကလည်းကွာ သီရိ အကြိုက်လေးပြောပေါ့”
“ဟင့် သီရိမှ မလုပ်ဖူးသေးတာ ဘယ်လိုလုပ် သိမှာလဲ”
“အင်းလေ သီရိ၊ လုံချည်ပါ ချွတ်လိုက်တော့မယ်”
“ကိုကို့ သဘောပါ ကိုကို”
သီရိရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတော့ ကျနော် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ လုံချည်ကို ချွတ်လိုက်တယ်။ လုံချည်လေးကျွတ်ပြန်တော့ ပင်တီလေး ပေါ်လာပြန်တယ်။ အနက်ရောင် ပင်တီလေးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ သီရိကလည်း ကုတင်ပေါ်ထိုင်ပြီး အချွတ်ခံတာလေ။ သီရိက ကုတင်ပေါ် ထိုင်နေတဲ့တွက် ပိပိကို ထင်ထင်ရှားရှား မတွေ့ရပေမယ့် ဆီးခုံမှာ မမွေးလေးတွေ ပေါက်နေတာကြောင့် ကျနော်စိတ်က အရမ်းကို ဖီလ်းဖြစ်တယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရင် ကျနော် သီရိကို အရမ်းလွမ်းတယ်။ သီရိကလည်း ကျနော်ကို အရမ်းလွမ်းနေတာလေ။ ကျနော့်ရဲ့ တဏှာစိတ်က ငယ်ထိပ်အထိရောက်နေတယ် ပြောရမလားပဲ။ သီရိ နို့ကို စို့ပြီးပြီဆိုတော့ ကျနော်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်က သီရိ ပိပိလေးကို အရမ်းယက်ပေးချင်တာပေါ့။
သီရိကို ကုတင်ပေါ် လှဲလိုက်တယ်။ မို့ဖောင်းနေတဲ့ ပိပိက အရမ်းကို လှတယ်ဗျာ။ ကျနော် မနေနိုင်တော့ဘူး။ သီရိ ဘယ်လိုခံစားနေလဲ ကျနော် မသိချင်ဘူး။ ရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ကျနော် လက်လွတ်မခံတော့ဘူးလေ။
ကျနော် ကုတင်အောက်ကနေကာ သီရိပေါင်လေးကို ကားကာ အပေါ်မြှောက်တင်လိုက်တယ်။ အရွတ်သေးသေးလေး ပိပိအကွဲကြောင်းက ကျနော့်ကို ယက်လှဲ့ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါ။ သီရိ ပိပိအကွဲကြောင်း အောက်ခြေမှာတော့ ကျနော့် ချိုချိုစို့ပေးမှုကြောင့် အရည်ကြည် ချောဆီလေးတွေ စိမ့်နေတယ်ဗျာ။ ကျနော်အတွက်တော့ အချစ်ရေ ချိုချိုလေးတွေပေါ့ဗျာ။ ချစ်သူရဲ့ ပိပိက ထွက်တဲ့အရည်ကြည် ချိုချိုလေးကို ယက်လိုက်တယ်။
“အားး အင့်ဟင့် ကို..ကိုရေ..အားး”
သီရိဆီက အချစ်အသံလေး ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ကျနော်လျှာကို အပြားလိုက်လုပ်ပြီး အားရပါးရ ယက်လိုက်တယ်။
“အာ့အင့်ဟင့်ဟင့် ကိုကိုရယ် ချစ်ရူးရလိမ့်မယ်”
အဲဒီအသံလေးက ကျနော့်စိတ်ကို အရမ်းဖီးဖြစ်စေတယ်။ အရွတ်သေးသေး တွန့်တွန်းလေးကိုလည်း လျှာနှင့် အပြားလိုက် ယက်လိုက်တယ်။
“အင်းးဟင်းးးဟင်းး ကိုကို အရမ်းကောင်းးတယ်ကွာ”
သီရီက အိပ်ရာခင်းကို ဆွဲဆုပ်ကိုင်ပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းနေရှာတယ်။ သူ့အတွက်လည်း ဒါဟာ ပထမဆုံး အချစ်ခံရခြင်းလေ။ ပထဆုံး အထိအတွေ့ကို အရသာ ရှိနေအောင် ကျနော် စွမ်းဆောင်ပေးနေတာလေ။ တစ်ချက်တစ်ချက် ယက်လိုက်တိုင်း သီရိဗိုက်သားလေးတွေ တင်းတင်းသွားတယ်ဗျာ။ လျှာကိုဖိပြီး မြုပ်သထက်မြုပ်အောင် ဖိသိပ်လိုက်တယ်။ အပျိုစစ်လေးဖြစ်လို့ အကွဲကြောင်းက ပေါင်ကားထားပေမယ့် စေ့နေတယ်လေ။ ကျနော်အားစိုက်ရတယ်လေ။
အကွဲကြောင်းတလျှောက် အတင်းယက်ရင်း သီရိအစေ့ကလေးကို ထိအောင် ယက်လိုက်တယ်။ ပိပိက မို့ဖောင်းနေတာမို့ အစေ့ကအထဲမှာ ရောက်နေတာလေ။ အစေ့ကလေးကို လျှာနှင့် ကလော်ပြီး နိုးဆွပေးလိုက်တယ်။ ဖိသိပ်လိုက် ကလော်လိုက်မို့လို့ သီရိမှာ တဟင်းဟင်း အော်နေရပြီ။ သီရိ ပိပိကလည်း အရည်တွေ ရွဲရွဲစိုနေတာလေ။ အရည်တွေ လျှာနှင့် သိမ်းယက်ပြီး မြိုချလိုက်တယ်။
“အားး ကိုကို.. သီရိ ရင်ထဲမှာ ကတုန်ကရင်ကြီးကွာ”
ကျနော်သီရိ အစေ့စုပ်လို့ရအောင် ပိပိနှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဘက် ဖြဲလိုက်ပြီး အစေ့ကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်တယ်။
“အာ့ရှီးးရှီးး အာ့ ကိုကို”
သီရီ တကိုယ်လုံး တုန်တက်လာတယ်။ သီရိ အော်ဟစ် ညည်းညူရင်း တွန့်လိမ်ကာ ပြီးသွားတယ်။
“အားး ကိုကို ထွက်ကုန်ပြီ ထွက်ကုန်ပြီ အားးးရှီးးရှီးးး”
သီရိဆီက အရည်တွေ လှိမ့်ထွက်လာတယ်။ သီရီ ပြီးသွားတော့ ကျနော့်လီးက အတွင်းခံ ဘောင်ဘီထဲမှာ အရမ်းရုန်းထွက်နေပြီ။ ကျနော် ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်တော့ ကျနော့်လီးက ချက်အထိကပ်နေပြီ။
“ဟယ်.. အကြီးကြီးပါပဲလား ကိုကို”
“သီရိ ထင်မထားဘူး ကိုကို… ကြောက်စရာကြီး”
“မကြောက်ဘာနှင့် သီရိရယ်… သူလည်း သီရိကို အရမ်းချစ်တာ နာအောင် မလုပ်ပါဘူး.. သီရိကော သူ့ကို အကြင်နာ မပေးချင်ဘူးလား”
“လုပ်ပါကွာ သူလည်း သီရိ အကြင်နာကို တမ်းတနေပြီ”
“ကြင်နာပေးချင်တာပေါ့ ကိုကိုရယ်၊ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဥစ္စာပဲလေ”
သီရိလည်းပြောရင်း ကျနော့်လီးကို ကိုင်ဆွဲပြီး စုပ်လိုက်တယ်။ ကျနော်လီးဟာ လုံးပတ် တစ်လက်မ သုံးမတ် အချင်းရှိကာ အရှည်ခြောက်လက်မ စွန်းစွန်းကလေးရှိတယ်။ ဆယ်တန်းကတည်းက အရေပြားဖြတ် နောက်လှန်ချုပ်ထားပြီး ချုပ်ရိုးနေရာမှ ဖုထစ်တွေ ထနေတယ်။
“ကိုကို ဒါကြီးဘာကြီးလဲ ကိုကို”
သီရိက ပြောလည်းပြော စုပ်လည်းစုပ်လိုက်တယ်။ သီရိက သူ့ပါးစပ်ထဲ လီးဝင်ဆန့်အောင် အားထုတ်စုပ်လိုက်တယ်။ နူးညံ့တဲ့ သီရိရဲ့ လျှာအစွမ်းကြောင့် ကျနော့်လီးက အစွမ်းကုန် တောင်လာတယ်။ အကြောကြီး ပျိုင်းပျိုင်ထပြီး သံချောင်း တစ်ချောင်းလို မာထန်လာတယ်။
သီရိခင်မျာ ကျနော့် လီးဒစ်ကြီး ငုံစုပ်ရတာ ကြာတော့ ညောင်းလာတယ်။ အပြင်ကပဲ ရေခဲမုန့်စားသလို လျှာနှင့် လီးဒစ်ကို ယက်ပေးတယ်။ စူကြားဖူးနာဝရှိသလိုပဲ လုပ်ပေးရှာတယ်။
“သဲ အပေါက်ကလေးကို လျှာလေးနှင့် ထိုးပေး”
လီးကို ယက်ရင်း ခေါင်းညိတ်ပြရှာတယ်။ ပြီးတော့ လီးအဝလေးကို လျှာနှင့် ထိုးပေးရင်း
“အင်း ကောင်းလိုက်တာ သီရိရယ်”
“ကိုကိုကသာ ကောင်းနေ သီရိမှာတော့ အာတွေညောင်းလှပြီ”
“အင်းပါ သီရီရယ်.. ကိုကို လိုးပါရစေတော့”
“ကိုကို သဘောပါ ကိုကို”
“ကဲ ခုနတုန်းကအတိုင်းလေးနေ၊ ကိုကို ကုတင်အောက်ကနေပြီး လုပ်မယ်”
သီရိလည်း ကုတင်အောက်ခြေ ဆင်းထိုင်ရင်း နောက်သို့ လှဲချလိုက်တယ်။ ပုံစကတော့ ကျနော့်အကြိုက် ကုတင်ကန့်လန်ဖြတ် အိပ်တဲ့ပုံပါ။ ဒီလိုးနည်းက အရမ်း အားရစရာ ကောင်းတယ်။ သီရိ ခြေနှစ်ဘက် မိုးပေါ်ထောင်လိုက်တော့ သီရိအဖုတ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်က ပြူးပြီး ထွက်လာတယ်။ ကျနော်လည်း လီးကို လက်တဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး လီးဒစ်မြုပ်ရုံ အကွဲကြောင်းတလျှောက် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်လိုက်တော့။
“အာ့.. အင်းးဟင်းးး ကိုကို”
သီရိရဲ့ အသံလေးက တုန်တုန်ရီရီလေး ထွက်လာတယ်။ ကျနော်လည်း ပိပိအပေါက်ထဲ လီးကို ဖိနှိပ်ပြီး သွင်းလိုက်တယ်။ လီးဒစ်က ဝင်သွားတာ သီရီရဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေပါ လိပ်ဝင်သွားသလို မြင်ရတယ်။
”ပြွတ်..ပလွတ်” ဆိုတဲ့ အသံနှင့်အတူ
“အားး ကိုကို… အား ကျွတ်ကျွတ်”
သီရိရဲ့ အလန့်တကြား အော်သံနှင့်အတူ လက်ကတွန်းထုတ်တယ်။ လီးက သုံးလက်မခန့် သီရိ အဖုတ်ထဲကို တင်းကြပ်စွာ ဝင်သွားတယ်။
“အားးလားးလား ကိုကို ဖြေးဖြေး‌လုပ်ပါ”
ကျနော်လည်း သီရိ သက်သာအောင် နို့ကို ကုန်း၍ စို့လိုက်တယ်။ နို့ကို ဘယ်ရော ညာရော အပြန်အလှန် ဘက်ညီအောင့် စို့ရင်း လျှာဖျားလေးနှင့် ယက်လိုက်တယ်။ ကုန်းစို့ရင်းပင် သီရိ ပုခုံးအောက် လက်လျှိုပြီး လက်ကို ပက်လက်ထားကာ ပုခုံးကို ဆွဲကိုင်လိုက်တယ်။
သီရိကတော့ အဖုတ်မှာ လီးဝင်ရင်း နို့စို့ခံရတဲ့အတွက် နာနေရာက သက်သာလာတယ်။ ကျနော်လည်း လီးကို အဆုံးထိ မသွင်းပဲ ဒစ်ကြီးနှင့် အစေ့ကို ပွတ်ဆွဲပေးပြီး တဖြေးဖြေး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လိုက်ရာ
ကျနော် နောက်ထပ် နှစ်လက်မခန့် ထပ်သွင်းလိုက်တယ်။
“အားးကိုကို… အားးနာလိုက်တာ ကိုကိုရယ်”
ကျနော့်လီးက အမှေးပါး ထိုးခွဲပစ်လိုက်တာလေ။ ဒစ်ကားကြီးဆိုတော့ အမှေးကွဲပြီပေါ့ဗျာ။
“ခဏလေးပါ သီရီရယ်၊ အပျိုစစ် အမှေးပါး ပေါက်သွားလို့ပါ”
“အင်း..သီရိသိတယ် ကိုကို အဲလိုနာမှာစိုးလို့ ကိုကိုကို သီရိမပေးခဲ့တာ”
ကျနော်ထပ်ပြီး မသွင်းရဲသေးဘူး။ တင်းကျပ်လာတဲ့ အဖုတ်ညှစ်အားကို ကျနော်ခံစားရပြီ။ နောက်ဝင်လာမယ့် လီးအတွက် ကြောက်လန့်ပြီး ညှစ်လေသလား ကောင်းလွန်းလို့ ညှစ်လေသလားတော့ မသိတော့ဘူး။ ခဏလေးရပ်ကာ နို့ကို ကုန်းစို့လိုက်တယ်။ ခဏတာ ဝေဒနာလေး ခံစားပြီး နောက်မှာတော့
“ရပြီ ကိုကို သီရိ ခံနိုင်ပြီ”
သီရိ ခံနိုင်ပြီဆိုမှ ကျနော် ကျန်ရှိတဲ့ လီးကို သွင်းလိုက်တယ်။ ကျနော့် ဆီးခုံနှင့် သီရိ ဆီးခုံ ကပ်သွားတဲ့အထိ ဖိကပ်လိုက်တယ်။ ဂေါ်လီသီးလို ချုပ်ရိုးက ဘုတွေက သီရိ အဖုတ်နံရံတလျှောက် ပွတ်ဆွဲလို့နေတယ်။
“အာ့..ကိုကိုရယ်…အာ့… သားအိမ်များ ထိလေသလား ကိုကို အထဲက အောင့်သွားတယ်”
“မထိပါဘူး သီရိရယ်… အစမို့ပါကွာ.. ကိုကို ဆက်လိုးတော့မယ်နော်”
ကျနော်လည်း လီးကို တစ်လက်မခန့် ချန်ပြီး အသွင်းအထုတ် မှန်မှန်နဲ့ အသားကျလေး ကျင့်လိုးလိုက်တယ်။
သီရိကတော့ မျက်လုံးလေး စုံမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ကာ ညည်းတွားနေတယ်။
“အာ့..ရှီးးရှီး မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးပါ ကိုကို”
ထိန်းပြီး လိုးနေတဲ့ ကျနော် ဝမ်းသာသွားပြီး မြန်မြန်လေး လိုးလိုက်တယ်။ ကျနော်ရဲ့ ဆောင်ချက်မှာ သီရိ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ လိပ်ဝင်သွားမတတ် ဖြစ်သလို ပြန်ထုတ်ချိန်မှာလည်း အုံလိုက်ကြွတက်လာသလို လီးဒစ်ကြီးက ဆွဲယူလာတယ်။ လီးဝင်ချက် တဗျိဗျိ တဇွပ်ဇွပ် မြည်နေသလို ဆီးခုံချင်းထိသံက တဖန်းဖန်း မြည်နေပြီ။ သီရိရဲ့ အော်ညည်းသံလည်း ပိုကျယ်လာတယ်။
“အားးရှီးးရှီးး ကိုကိုရယ်.. အာား”
“အား အရမ်းကောင်းတယ် ကိုကို.. အား.. ရှီး… ကြမ်းကြမ်းလေး လုပ်ပါ ကိုကို… သီရိ ပြီးချင်နေပြီ”
ကျနော့် ချစ်သူလေး နာမှာစိုးလို့ ကြမ်းကြမ်း မလုပ်ခဲ့တာ။ ချစ်သူသာ တောင်းဆိုလို့ကတော့ ကုတင်ကျိုးပါစေဆိုတဲ့ ကျနော် သီရိပုခုံးကို ဆွဲကိုင်ပြီး ကြမ်းလိုက်တယ်။ သီရိကလည်း ကျနော့်ခါးကို ဆွဲပြီး အောက်ကပင့်လာတယ်။ သီရိရဲ့ လက်သည်းချွန်တွေလည်း ကျနော့် အသားကို စူးနစ်ဝင်လာတယ်။ အဲလိုဖြစ်လေ စိတ်ကြွလေဖြစ်ပြီး တဘိုင်းဘိုင်း တဒိုင်းဒိုင်း မြည်အောင် လိုးလိုက်တယ်။
အား..ကိုကို သီရီပြီးပြီ အားးး”
သီရိက အကြောဆွဲသလို တစ်ချက် နှစ်ချက်ခန့် တွန့်ကာ ငြိမ်သွားပေမယ့် ကျနော်ကတော့ မပြီးသေးဘူး လိုးလို့ ကောင်းဆဲ။ သီရိ ပြီးသွားတော့ အရည်တွေ ထွက်လာတာကြောင့် သီရိအဖုတ်က အမြှုပ်တွေပါ ထလာတယ်။ လိုးရတာလည်း အရမ်းကောင်းလာတယ်။ နောက်ထက် ငါးမိနစ်ခန့် ဆက်လိုးတော့ ကျနော့်သုတ်တွေ သီရိအဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပေမယ့် ကျနော်လီးက နည်းနည်းမှ မညိုးသေးပါဘူး။
“အား ကိုကို ခဏလောက် နားပါအုံး ကိုကိုရယ် သီရိ အဖုတ် နာလှပြီ”
ကျနော့် အချစ်လေး သီရိကို သနားလို့သာ ခဏရပ်ပေးလိုက်တယ်။ လီကတော့ တောင်နေဆဲလေ။ ခဏတာ ရပ်ပေးလိုက်တော့
“အာ.. ကိုကို ပြီးသွားပြီ မဟုတ်ဘူးလား”
ကျနော့ရဲ့ တောင်နေဆဲ လီးကိုကြည့်ပြီး သီရိက ပြောလာတယ်။
“သီရိအမြင်ပဲလေ ကိုကို မပြီးသေးဘူးကွာ”
“အာ သီရိတော့ ခဏနားချင်တယ် ကိုကို”
“နား..လေ အချစ်.. ဒါပေမယ့် ကိုကို မပြီးသေးဘူး‌နော်”
“အင်းပါ သီရီ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ချင်တယ်”
“လာလေ ကိုကို လုပ်ပေးမယ်”
ကျနော် ရေချိုးခန်းဘက်ကို သီရိလက်ဆွဲရင်း ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ရေချိုးခန်းထဲ water heater လေးကို ဖွင့်ပြီး ရေနွေးလေးနှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
”အာ ကိုကိုကလည်း သီရိဘာသာ လုပ်ပါ့မယ်”
“ရဘူး ကိုကိုက လုပ်ပေးချင်တာလေ”
“အင့်အင်း..ကွာ ရှက်တယ်၊ သီရိဟာ လုပ်ပေးနဲ့၊ ကိုကိုဟာ အရင်လုပ်ပေးလိုက်မယ် လာခဲ့”
သီရိ ကျနော့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ရေနွေးစပ်ထားတဲ့ ရေဖြင့် ယုယုယယ ဆေးပေးတော့ ကျနော်လီးက ပိုပြီး မာလာပြန်တယ်။
“အာ ကိုကို မာလာပြန်ပြီ၊ တော်တော်ဆိုးတယ်”
“ဟင်းးဟင်းးး သီရိ အဲလို ကိုင်ပေးတော့ အရမ်းထလာတာလေ”
“မလွယ်ဘူးကွာ ဒီနေ့တော့ အသက်တောင် အိမ်ပြန်ပါပါ့မလား မသိတော့ဘူး”
“အများကြီး မလုပ်ပါဘူးကွာ သူပျော့သွားရင် ရပ်လိုက်မယ်”
“အင်းးးးပါ.. ကိုကို့သဘော… ကိုကိုကလည်း စပြီးပဲလုပ်ပြီးပြီပဲ လုပ်ပေါ့”
သီရိက ဆပ်ပြာဘူးရည်လေးညစ်ရင်း ကျနော့်လီးကို သေချာတိုက်ချွတ်ပေးတာ ဖင်ကြားရော ဂွေးဥတွေပါ ပြောင်အောင် ဆေးလိုက်တယ်။
“ကဲရပြီ ကိုကို အိပ်ခန်းထဲကပဲ စောင့်တော့”
ကျနော်လည်း သီရိကို ကုတင်ပေါ်က စောင့်နေလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ သီရိရောက်လာပြီး ကုတင်ပေါ် လှမ်းတက်လိုက်ကာ လှဲနေသော ကျနော်က သီရိကို လှမ်းဖက်ပြီး နမ်းလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ပြန်နမ်းပြီး ကျနော်နှင့် သီရိ လျှာတိုက်ပွဲစနေတာပေါ့။ ကျနော်လက်ကတော့ ဝက်မြီးလိုပဲ လှုပ်ရှားနေလိုက်တယ်၊၊
လူပျိုသိုး ကျနော့်အတွက်ကတော့ လိင်ဆက်ဆံရေးကို ကြုံဖူးနေတာ ကြာပါပြီ လိုးလည်း လိုးနိုင်တယ်၊ အကြာကြီးလည်း လုပ်နိုင်တယ်။ လိုးပြီးရင် စွဲစွဲလန်းလန်းကျန်တဲ့ သဘောတွေကြောင့် ဇယားကပ်မှာ စိုးလို့ ကျနော်ရှောင်လိုက် စားလိုက်ပေါ့။ အခုက သီရိကို တကယ်လည်း ချစ်မြတ်နိုးပြီး လက်ထပ်ယူမှာမို့ အိမ်ကိုအပါ ခေါ်လိုးတာပါ။ သူ့ကိုလည်း စွဲလန်းနေအောင် ကျနော်လိုးမှာပါ။ အလိုးမခံဖူးသေးတဲ့ သီရိအခုဆို ကျနော့်အလိုကျ ဖြစ်လာပြီလေ။
ကျနော်က သီရီကိုဖက်ပြီး လည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက် နားရွက်ကလေးကို ဖြေးဖြေးကိုက်လိုက်နဲ့ ဆွပေးနေတာပါ။ အချို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကာမစိတ်ဖြစ်စေတဲ့ နေရာဟာ မတူဘူးလေ။ တချို့က လည်တိုင်လေးကို နမ်းရင် ကာမစိတ်က အရမ်းကြွလာသလို၊ တချို့ကလည်း တကိုယ်လုံး ပွတ်သတ်ပေးရင် စိတ်တွေ အရမ်းထတယ်။ တချို့ကလည်း နို့စို့ပေးရင်အရမ်းကြိုက်တတ်တယ်လေ။
သိရီအကြိုက် မှန်းဆရင်း ကျနော် သီရိရဲ့ ကာမစိတ်ကို အသစ်တဖန် နှိုးဆွဖို့ လုပ်လိုက်တယ်။ သီရိလည်း ကျနော့လီးကို ကိုင်ဆွပေးပြီး
“အင့်..ဟင်းးးး ကိုကိုရယ် သီရိ ပြန်ဖြစ်လာပြီကွာ”
“သဲလေး ကိုကို ပြန်မှုတ်ပေးချင်တယ်ကွာ”
“ပြောစရာလိုလို့လား ကိုကိုရယ်၊ အားလုံး ကြိုက်ကြမှာပဲလေ”
ကျနော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် သီရိပိပိကိုဒုတိယံပိ ယက်ရမှာပေါ့။ ဒီအခေါက်ကတော့ ဆပ်ပြာရနံ့လေး သင်းသင်းမွေးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အတွက်တော့ အဲဒါဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်ပါပဲ။ ပိပိအနံ့နှင့်တူမှ အရသာရှိတယ်။ မွှေးပြီး အေးစက်နေရင် အရသာ ပေါ့တာပေါ့ဗျာ။ ပိပိရနံ့ သင်းသင်းလေကသာ ကျနော့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာ။ ဒီတစ်ခါတော့ ပိပိကို သေသေချာချာလေး ယက်လိုက်ဖို့ သီရိခါးအောက် ခေါင်းအုံး ခုဖို့အတွက်
“ချစ်လေး…. သဲခါးအောက် ခေါင်းအုံး ခံလိုက်မယ်လေ”
“အင်းလေ ကိုကို အဆင်ပြေသလို လုပ်လိုက်ပေါ့”
သီရိလည်း ခါးကို ကြွပေးတဲ့ အတွက် ကျနော်ခေါင်းအုံးတစ်လုံးယူကာ သီရိခါးအောက် ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ သီရိပိပိက ပိုပြီး ကြွလာတယ်။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ အသားအရည်က အခုတော့ ကျနော့်ကြောင့် နီရဲနေတာပေါ။ လိုးချက်ပြင်းပြင်းဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပိပိဟာ နီရဲလို့ နေတယ်။ ကျနော်လည်း သီရိခြေကို အပေါ်တွန်းတင်တော့ သီရိက လက်နဲ့ လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါ သီရိရဲ့ ပိပိသာမက သီရိရဲ့ ဖင်နီနီလေးပါ ပေါ်လာတယ်။
တဏှာစိတ်တွေ မွန်ထန်နေတဲ့ ကျနော့် အတွက်ကတော့ အကြိုက်ပေါ့၊၊ ကျနော် စအိုဝကနေပြီး ပိပိ အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် ယက်လိုက်တယ်။ သီရိတကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားတယ်။ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားတာလေ။
“အားးးး ကိုကိုရယ်.. ဘယ်လို လုပ်လိုက်တာလဲ”
ကျနော် စအိုဝ နီနီကလေးကို လျှာနှင့် ထိုးမွှေလိုက်တယ်။
သီရိတစ်ယောက် လိမ့်နေအောင် ခံစားနေရတယ်။ စအိုဝ နီနီလေးကို အယက်ခံလိုက်ရတဲ့ ခံစားမှုက တဏှာစိတ်ကို ပြင်းပြစေတယ်။ ပိပိထဲက အရည်တွေ စီးကျလာတယ်။ ကျနော်ပိပိကို အလှည့်ပေးပြီး နှုတ်ခမ်းသားအား လက်နှင့်ဖြဲကာ လျှာနှင့်အတွင်းနံရံကို မွှေလိုက်တယ်။
သီရိတစ်ယောက် တဆတ်ဆတ် တုန်သွားပြီး တအာ့ အာ့နှင့် ညည်းညူနေတော့တယ်။
“အာ့ ကိုကို တော်ပြီကွာ.. အားး သီရီ သေလိမ့်မယ်”
ကျနော်လည်း ရပ်မပေးဘူး အစေ့ကို တပြွတ်. .ပြွတ်စုပ်လိုက်တယ်။
“အားလားးလားး ဝိုးးးတော်ပြီ အားးးးး ကိုကို အိုးးး”
သီရီတစ်ယောက် မခံနိုင်တဲ့အဆုံး အသည်းအသန် ရုန်းကန်ပြီး ထလာတယ်။
“အာ.. ကိုကို တော်ပါတော့ဆို”
“အာ….ဘယ်လိုကြီးဖြစ်မှန်းကို မသိဘူး၊ အသည်းတွေ အူတွေ ပြုတ်ကျသွားသလို တလှပ်လှပ်နဲ့ကွာ”
“ဟားးးဟားး ကိုကို အဲလောက်တောင် ကျွမ်းသလားကွာ”
“လာခဲ့ သူများကို နှိပ်စက်တာ ကိုကိုလည်း ပြန်ခံစားရမယ်”
“ရပါပြီ သဲရဲ့ ကိုကို လိုးချင်ပြီ”
“မရဘူး… သူများခံရသလို ခံရမယ်.. လာ… အိပ်”
ကျနော်လည်း လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ သီရိက
“လာလေ.. တင်ပါးအောက် ခေါင်းအုံးခံ သီရိတုန်းကလို ပြန်လုပ်မှာ”
ကျနော်လည်း ခါးကို ပြန်ကြွပေးလိုက်တယ်။ သီရိက ကျနော့်ခါးအောက် ခေါင်းအုံး ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့
ကျနော် ခြေထောက်တွေ မြှောက်ပြီး ဒူးကွေးကာ နေလိုက်တယ်။ သီရိက ကျနော့်ပေါင်ကြား ခေါင်းထိုးဝင်ပြီး လီးကို စစုပ်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ မသီရိ ကျနော့်ကို လက်စားချေခန်းပေါ့ဗျာ။
ကျနော် အော်ရပြီလေ။ ပထမ အခေါက်တာ ရှက်ရွံ့နေပေမယ့် ဒီတခေါက်တော့ လီးဒစ်တွေကို လျှာနှင့်ယက်တယ် ဂွင်းတိုက်ပေးသေးတယ်ဗျ။ ပါးစပ်ထဲ လီးငုံပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်တယ်။
ကျနော်လည်း တအအားနှင့် ဖီးတွေ အရမ်းကောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ လီးထိပ်ဝကို လျှာနှင့် ထိုးထိုးမွှေတယ်ဗျ။ လီးစုပ်ပေးရင်း ဂွေးဥကို ဖွဖွလေး ညှစ်ပေးတယ်။ ကျနော့်လီးက အစွမ်းကုန် တောင်လာတယ်။ သီရိက လီးစုပ်နေတာကို ရပ်ပြီး ဂွေးဥလေးကို တချက်တချက်စီ စုပ်လိုက်လုပ်တယ်ဗျ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျနော်အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တောင်တုန်တယ်ဗျ။
“အားးလားးလား သီရီရယ်.. အူးးး..အင်းးးးး”
သီရိ ကျနော့် ဂွေးဥကို ယက်ပြီး တွန်းတင်ကာ ဖင်ကို ယက်တယ်။ ကျနော် ပြီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်လာတယ်။ သုတ်တွေ အရမ်းတိုးသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ လီးကို သုတ်တိုးချက်က တဒုတ်ဒုတ် မြည်တယ်။
“အားးရပြီ… သဲ… ကိုကို ပြီးသွားလိမ့်မယ်.. ကိုကိုထပ်လုပ်ချင်သေးတာ”
“ဟင်းးးးဟင်းး သိပြီလား သူများကို နှိပ်စက်သလို ပြန်ခံရမယ်ဆိုတာလေ”
သီရိ အလိုကျ ပြောလိုက်တယ်။ သူ မကျေနပ်လို့ ပါမစ်ပိတ်ရင် ငတ်ရမှာလေ ကြောက်ရတယ်။ လင်မယားမှ မဖြစ်သေးတာလေ။
“သီရီ.. ချစ်လေး ကုန်းပေးကွာ”
“အင်း ကုန်းပေးမယ်လေ။ ဘယ်လို ကုန်းရမလဲ”
“ကုတင်စွန်း ကုန်းပေး၊ ကိုကို အောက်ကနေ လိုးမှာ”
သီရိလည်း ကုတင်စွန်း ကုန်းပေးတယ်။ သီရိကုန်းပေးတော့ ဖင်ဝိုင်းလေး သီရိရဲ့ အနောက်ပိုင်းက အရမ်းချစ်စရာကောင်းလှတယ်။ ကျနော်လည်း ကုတင်နားကပ်ပြီး သီရိအနေအထား နည်းနည်းပြင်လိုက်တယ်။ ပြီမှ ဖင်ကြား လီးကို အပေါ်တင်ပြီး လေးငါးခါ ပွတ်တိုက်လိုက်တယ်။ သီရိ နည်းနည်း တုန်လှုပ်သွားပြီး
“ကိုကိုနော်… သီရိ ဖင်မခံဘူးနော် တော်ကြာ ဖင်ပြဲသွားလို့ ဒုက္ခရောက်ရမယ်”
“ကိုကို မလုပ်ရက်ပါဘူး သဲရယ်”
ပါးစပ်ကသာပြောတာ စိတ်ထဲမှာတော့ လက်ထပ်ပြီးလို့ကတော့ တွေ့မယ်လို့ ကြိမ်းလိုက်တယ်။ ကျနော်နှင့် တွေ့တဲ့ ဆော်တိုင်းက ဖင်လိုးခံတာ ကြိုက်ကြလို့ ဇော်မိုးလို့တောင် မခေါ်တော့ ဖင်လိုးကောင် ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတာလေ။ ကျနော် စိတ်ထဲ ကြိမ်းဝါးရင်း သီရိအဖုတ်ထဲ လီးခေါင်းမြှုပ်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ သီရိ တစ်ချက်ကလေး တုန်သွားတယ်။ ဖြေးဖြေးလေးပဲ တရစ်ချင်းသွင်းတယ်။ လီးက ဗျစ်.. ဗျစ်နှင့် တရစ်ချင်း တိုးဝင်သွားတယ်။
“အာ့ ကိုကို အောင့်တယ် ဖြေးဖြေးးကွာ”
သိတယ်လေ ဒီပုံစံက စစလိုးရင်း အောင့်တက်တာ သဘာဝပဲ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျနော်က သီရိ ကြောက်မသွားအောင် ဖြေးဖြေးလေးလိုးရင်း စအိုဝကလေးကို လက်သည်းနှင့် မထိတထိလေး ခြစ်ပေးရင်း သီရိတစ်ယောက် တဏှာစိတ်တွေ ထလာအောင် ထပ်ပြီး နိုးဆွလိုက်တယ်။ ဖင်ကို မထိတထိလေး လက်သည်းနှင့် ခြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ သီရိစိတ်တွေ ထန်လာပြီး အော်ညည်းလာတယ်။
“အာ့ အင်းးဟင်းးးဟင်းးး ကိုကို”
ကျနော် တဖြေးဖြေးနှင့် သီရီ ခံနိုင်မှန်း သိလာတော့ အရှိန်လေး ထပ်တင်လိုက်တယ်။ လီးက ဇွိ ဗျိ ဗျစ်ဗျစ်နှင့် ထိုးဝင်လိုက် ထွက်လာလိုက်ပေါ့။
“အင်းးဟင်းးးး ကိုကို ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ကွာ”
သိတယ်လေ အဲလိုဖြစ်လာအောင် တမင်လုပ်ထားတာ။ စအိုဝကို လက်သည်းနှင့် ခြစ်လေ အားမလိုအားမရ စိတ်တွေဖြစ်လေ ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာ သီရီက ကြမ်းကြမ်းလေး လိုးခိုင်းတော့၊ စအိုဝကို ခြစ်နေတဲ့ လက်ကို နေရာပြောင်းပြီး သီရိခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို ကိုင်ပြီး ဝုန်းလိုက်တယ်။ ကုတင်ဘောင်တောင် တကျွီကျွီ မြည်တယ်။ လိုးချက်က တဖန်းဖန်း မြည်နေသလို လီးဝင်ချက်ကလည်း တဘွတ်ဘွတ် မြည်လာတယ်။
နှာမှုတ်သံနှင့်အတူ သီရိတစ်ယောက် ပြီးတော့မယ်။ ကျနော်လည်း အဆက်မပြတ် တွန်းလိုးရင်း သီရိခါးကို တင်းတင်းဆွဲကိုင်ပြီး လိုးတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေ ပြင်းလွန်းလို့ သီရီတင်ပါးတောင် ဖြူဖွေးတာကနေ ပန်းရောင်ပြောင်းလာတယ်။ တဖြေးဖြေးနှင့် နီလာတယ်။ ကျနော်လည်း မိနစ်နှစ်ဆယ်ကျော် လိုးလိုက်တယ်။ သီရိက အားမရှိတော့ဘူး သူကပြီးသွားလို့ ဒူးခွေနေပြီ။
ငါးမိနစ်လောက် အဆက်မပြတ်လိုးရင်း လီးကို အဆုံးထိကပ်ကာ သုတ်တွေ ပန်းထည့်လိုက်တယ်။ သုတ်တွေ ကုန်အောင် ပန်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ သီရိခါးကို လွှတ်ချလိုက်တယ်။ သီရိက ကျနော်လွှတ်လိုက်တော့ ကုတင်ပေါ် မှောက်လျက် ကျသွားတယ်။ ကျနော်လည်း သီရိဘေးနားကပ်ပြီး
“အားကို မရှိတော့ဘူး ကိုကိုရယ်”
ဖျော့တော့တော့ လေသံနှင့် ပြောလေတော့ ကျနော် ရယ်ချင်သွားတယ်။
“ကဲ သဲ ခဏနားအုံး ကိုကို စားစရာ သောက်စရာတွေ ပြင်လိုက်ဦးမယ်”
ကျနော် စားစရာ သောက်စရာတွေ ပြင်ပြီးတော့ အိပ်ခန်းဘက် လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် သီရိကတော့ အိပ်ပျော်နေဆဲပါပဲဗျာ။ အဲကွန်းဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းမှာ သီရိ အအေးမိနေမှာစိုးတော့ စောင်လေးခြုံပေးတော့ သီရိ လန့်နိုးသွားတယ်။
ဆိုပြီး ကျနော့်ကို လှမ်းဖက်တဲ့အတွက် ကျနော် ပြန်ဖက်လိုက်ကာ နဖူးလေးကို အနမ်းတပွင့် ခြွေလိုက်ပြီး
“ဟော ချစ်လေး နိုးသွားပြီလား”
“အင်း ကိုကို ”
“အင်း..ကိုကို ထူမှ ထမှာ”
ကျနော်ထပ်ပြီး အနမ်းလေးပေးရင်း သီရိကို အိပ်ရာပေါ် ထူမတ်ပေးလိုက်တော့
“ကိုကို သီရိ အဝတ်အစားတွေ ပေးကွာ”
သီရိကခေါင်းက ဆံပင်ကို သပ်ချရင်း ပြောတော့
“နေအုံး သီရိရဲ့ ကိုကို့ အင်္ကျီနှင့် ပုဆိုး ခဏ ဝတ်ထားပါလား”
ကျနော် ပုဆိုးနှင့် ရှပ်တစ်ထည် ပေးလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ယူဝတ်လိုက်တယ်။ ကျနော့် အဝတ်အစားလေးနှင့်လည်း သီရိက ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဗျာ။
“လာလေ ချစ် ထမင်းသွားစားမယ်”
“နေပါဦး ကိုကို သီရိ ရေချိုးခန်း ဝင်လိုက်မယ်”
သီရိ ရေချိုးခန်းက ထွက်လာတော့ မျက်နှာသစ်လာတယ်။ ကျနော် သဘက်တစ်ထည် လှမ်းပေးရင်း
“ရော့လေ ချစ် မျက်နှာသုတ်လိုက်တော့”
ဆိုပြီး သီရိ သဘက်ကို လှမ်းယူရင်း မျက်နှာနှင့် လက်တွေကို သုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ ကျနော့်ကို
“ရော့ ကိုကို သိမ်းလိုက်တော့”
ကျနော် လှမ်းယူရင်း သီရိကို လက်ဆွဲကာ ထမင်းစားခန်းသို့ ခေါ်ယူလိုက်တယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့
“အခုမှပဲ နေသာတော့တယ် ကိုကိုရယ်”
ဗိုက်ပြည့်သွားတော့ အားအင်တွေ ပြန်ပြည့်လာသလို ခံစားရတယ်။ အချိုပွဲလေးစားပြီး
“ချစ်လာကွာ အိပ်ခန်းထဲ သွားရအောင်”
“အင်း ခဏတော့ အနားယူကြမယ်”
“မကြောက်ပါနှင့် သဲကလည်း ကိုက်မစားပါဘူး၊ ချစ်ရုံလေးပဲ”
“အဲ့ဒါကိုကြောက်တာ လူလည်း ထူပူနေပြီ”
သီရိကို အိပ်ခန်းထဲ ခေါ်လာပြီး အိပ်ရာပေါ် လှဲအိပ်ရင်း
“အာ ဘယ်ဖြစ်မလဲ မာမီဆူလိမ့်မယ်”
“သီရိ ငယ်သေးတယ် ကိုကို ကျောင်လည်း မပြီးသေးဘူး.. နောက်ပြီး သီရိက လုပ်ချင်တာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်”
“အင်းပါကွာ သီရိရယ်.. ကိုကိုက အတူတူ နေချင်လှပြီ”
“ဟင်..အခုလည်း အတူတူနေတာပဲ မဟုတ်လား”
“ချစ်ကလည်းကွာ အခုလို နေရတာ အားမရဘူးလေ”
“အင်း တကယ်နော် ”
“အင်းး ဒီနေ့တော့ ကိုကို နေချင်သလောက်သာနေ၊ ကိုကို့အကြိုက် သီရိနေပေးမယ် သိလား”
“အဲလို အလိုက်သိလို့ ပိုချစ်ရတာ”
“အွန်းးးးး ကိုကိုနဲ့ချစ်တာ မလွယ်ဘူး၊ နောက်ထပ် မရဘူး သိလား”
ကျနော် နောက်ထပ် အစပြုနိုင်အောင် သီရိကို နမ်းလိုက်တယ်။
“တော်တော့ ကိုကို သီရိနှုတ်ခမ်းတွေ ထူပူနေပြီ၊ လည်ပင်းမှာလည်း အကွက်တွေ ထနေတယ်၊ နောက်ပြီး သီရိနို့တွေလည်း ကျိမ်းနေပြီ၊ ကိုကို့ကို လုပ်ပေးမယ်”
သီရိ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်ပြီး ကျနော့်လီးကို စုပ်တယ်။ တဖြေးဖြေးနှင့် သီရိ လီးစုပ်တာ ကျွမ်းကျင်လာတယ်။ လီးကို တပြွတ်ပြွတ်နှင့် စုပ်ပေးနေတယ်။ ကျနော်လည်း လီးက အရမ်းတောင်လာပြန်တယ်။ တဏှာစိတ်က ပြင်းပြလာလို့ သီရိ ပိပိကို မှုတ်ချင်လာတော့
“သဲ ကို့မျက်နှာအပေါ် ခွလိုက်ပါလား”
“လုပ်ပါကွာ ကိုအရမ်း ဆန္ဒတွေ ပြင်းလာလို့ပါ”
“ကန့်တော့ ကိုကို သီရိတက်ပေးမယ်”
သီရိက ကျနော့်အပေါ် ကားယားခွကာ မျက်နှာပေါ် တက်ထိုင်တယ်။ ကျနော်လည်း သီရိဖင်ကို လက်နှစ်ဘက်နှင့်မကာ အဖုတ်ကို ပါးစပ်နှင့် နေရာကျအောင် လုပ်လိုက်ပြီး ယက်လိုက်တယ်။ ကားယားခွထားရတော့ သီရိပိပိဟာ နည်းနည်းဟနေတာ။ သီရိဆီကထွက်တဲ့ အရည်တွေ ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာတယ်ဗျ။ မြိုလည်းချ ထပ်ယက်ပေါ့။
သိရီဆီက ညည်းသံတွေ ထွက်လာတယ်။ လျှာနှင့်အားရပါးရ ယက်လေ သီရိဖင်နှင့် အဖုတ်ကြားထိလေ၊ အရည်တွေလည်း တစက်စက်ကျလေ။ ကျနော်လည်း မြိုချလေ။ သီရိကို ရှေ့နည်းနည်းရောက်အောင်ပို့ရင်း သီရိဖင်ကိုပါ ယက်လိုက်တယ်။ စအိုဝလေးက စူတူတူလေး ဖြစ်နေတာလေ။
“အားးးကိုကို အရမ်းကောင်းတယ် ကိုကိုရယ်”
သီရိဆီက ညည်းသံတွေ ထွက်လာလေ။ ကျနော် ကြမ်းကြမ်း ယက်လေပါပဲ။ သီရိအသံတွေ ဆူညံနေတာလေ။ နောက်ဆုံး သီရီအစေ့ကို အောက်ကနေပြီး ကလော်ပြီး လျှာနှင့်ထိုးတော့
“အားးဟားးးဟားးးး အရမ်းကျိမ်းနေပြီ ကိုကို တော်ပါတော့ သီရိ မနေတတ်တော့ဘူးကွာ.. အင်းးဟင်းးးးအားးး”
သီရိ ရပ်ခိုင်းတော့ ကျနော်လည်း ရပ်လိုက်တယ်။
“သဲ..ကိုကို အပေါ်က တက်ပြီး လုပ်ကွာ”
သီရိအောက်ကို ရွှေ့သွားပြီး ကျနော့် အပေါ်က ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ လီးကိုကိုင်ပြီး ပိပိနှင့်တေ့ကာ ထိုင်ချလိုက်တယ်။
ဆိုပြီး တချက်ကြွလိုက်ကာ သီရိ ထပ်ထိုင်ချတယ်။ သီရိမျက်နှာ လှမ်းကြည့်တော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ပြီး ဇိမ်ယူနေတာ။ ပြီးတော့မှ သီရိက မြန်မြန်လေးလုပ်တယ်။ လုပ်ရင်းညောင်းနေရင် ကြိတ်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်တယ်။ သီရိအပေါ်က ဆောင့်ချချက်ကြောင့် လီးကအဖုတ်ထဲ တဗျိ.. ဗြိ တဘွတ်ဘွတ် တဖန်းဖန်း မြည်လာတယ်။
ငါးမိနစ်လောက် လုပ်လိုက်တာ သီရီ မောဟိုက်နေတဲ့ အသံတွေ ကြားလာရတယ်။
“အားးဟင်းး အာတော်ပြီ ကိုကို သီရိ ညောင်းနေပြီ”
“အဲဒါဆိုလည်း သီရိက ကိုကို့ခြေထောက်ဘက် မျက်နှာမူပြီး လုပ်ကြည့်ပါလား”
သီရိလည်း အနေထားမှန်အောင် လုပ်လိုက်ပြီး လီးကို ပိပိထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ လူကတော့ ခြေရင်းဘက် လက်ထောက်ပြီး ထိုင်လိုက် ထလိုက် လုပ်ပေးတယ်။ ကျနော်က သူ့တင်သားတွေကို တွန်းတင်လိုက် အောက်သို့ ချလိုက်နှင့် သီရိ မညောင်းရအောင် အားကူပေးလိုက်ရင်း လိုးရတယ်။ သီရိဆီက ညည်းသံတွေ ထွက်လာတယ်။ ညည်းသံတွေ ထွက်လာသလို သီရိဆောင့်ချက်က ပိုသွက်လာတယ်။
“အားးးးကိုကို သီရိ မရတော့ဘူးးးးအားးး”
“သီရိ ဆင်းလိုက် ကိုကိုလုပ်မယ်”
သီရိလည်း ကျနော့်အပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်ကလေး အိပ်တော့ ကျနော် သီရိခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုလိုက်ကာ ဖင်ကို အပေါ်ဆွဲထောင်ပြီး အပေါ်စီးကနေ လိုးလိုက်တယ်။ လိုးချက်က ပြင်းလွန်းလို့ လီးဝင်ချက်က တဗျိဗျိ တဇွိ ဇွိ နှင့်မြည်သလို ဆီးခုံချင်း ရိုက်သံ တဖန်းဖန်း ထွက်နေတယ်။
ကျနော်လည်း အားရပါးရ လိုးထည့်လိုက်တယ်။ အပျိုစစ်ကို ဒီလိုလိုးရတာ အရမ်းလည်း ဖီးရှိတယ်။ လိုးရင် အားနှင့် လိုးနိုင်ပြီး ကြာကြာလိုးလေ မိန်းကလေးက စွဲလန်းလေဆိုတော့ နောက်အကြိမ်ရအောင်လို့ အစွမ်းကုန် လိုးနေတာပါ။ သီရိကလည်း ကြမ်းကြမ်းလိုးလေ ကြိုက်လေ အော်ညည်းလေပါပဲ။
“ကောင်းတယ် ကိုကို ကြမ်းကြမ်းလေး လိုးပေး”
ကြမ်းလေကြိုက်လေ အာဂသတ္တိပိုင်ရှင် သီရိ ၊ ကြမ်းကြမ်း လိုးတတ်တဲ့ ကျနော်နဲ့က ကွက်တိ၊ အမြဲလိုးရရင် ကောင်းမှာ။ မြန်မြန်လက်ထပ်ပြီး အမြဲဒီလို နေပစ်ချင်တာလေ။
“ကို ကို အားးးးကောင်းတယ် ကိုကို ”
ဆီးခုံချင်း ပွတ်တိုက်လို့ အမွှေးတွေ တဗျစ်ဗျစ် မြည်နေသလို သီရီလည်း အရည်တွေ ထွက်လာတယ်။ အမြုပ်တွေလို ဖြူဖြူ အနှစ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ တဘွတ်.. ဘွတ် မြည်လေပဲ သီရိက ခေါင်းအုံးကို လက်နောက်ပြန်လှမ်းကိုင်ရင်း
“ဘွတ် ဖတ် ဖန်းးဘွတ် ဘွတ်..ဘွတ် ”
အပျိုအဖုတ်မို့လို့သာ လေသံမထွက်တယ်။ တကယ်ဆို ဘွိ ဘွတ် ဆိုတဲ့ လေသံ ထွက်လောက်အောင် မြန်မြန်လေး လိုးလိုက်တယ်။ ဆီးခုံနှစ်ခုလုံး အရည်တွေ စိုရွှဲနေတာ။ သီရီ အဖုတ်ထဲက ထွက်တဲ့ အရည်တွေ ဖင်ကြားထဲအထိ စီးဆင်းသွားနေတယ်။ လိုးချိန် နာရီဝက်နီးပါးလောက် အားရပါးရ လိုးလိုက်တဲ့အခါ ကျနော်လည်း သုတ်တွေ ထွက်သွားတယ်။ သုတ်ထွက်သွားတာတောင် အချက်ငါးဆယ်လောက် မနားတမ်း ဆက်လိုးလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ပျော့ခွေသွားပြီး မျက်နှာကလေးကို ချောင်ကျသွားတော့တယ်။
အဲဒီနေ့က လိုးတာ လေးချီမြောက် လိုးပစ်လိုက်တယ်။ သီရိခင်မျာ လမ်းတောင် ဖြောင့်အောင် မနည်းလျှောက်နေရတယ်။ အဲကွန်းတတ်ထားတဲ့ အခန်းမှာ အဝတ်ဗလာနဲ့ အချိန် အတော်ကြာကြာနေခဲ့ရတဲ့ သီရိတစ်ယောက် နှာတွေ မွှန်လာတယ်။ ရေချိုး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ချိန်မှာ မျက်လုံးလေးတွေ နီရဲသလို နှာပါချေလာတော့
“မပြန်လို့မှ မရတာ ကိုကိုရယ်”
“ရတယ် ကိုကို မာမီ ဆူလိမ့်မယ်”
“အင်းပါ ကိုကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ”
ကျနော် ကားကိုမောင်းပြီး သီရီက အိပ်ပျော်လာတယ်။ သံလျှင်ဘက်ရောက်ပြီး သီရိအိမ်အထိ လိုက်ပို့လိုက်တယ်။ သီရိလည်း ကားပေါ်ကဆင်း လမ်းလျှောက်တာ လူမသိအောင် ဟန်လုပ်ပြီး ကြိုးစား လျှောက်နေရတဲ့ပုံပါပဲ။
ကျနော် အိမ်ပြန်ပြီးရောက်ကြောင်း သီရိဆီ ဖုန်းဆက်တော့ သီရိ ဖုန်းမကိုင်နိုင်တော့ဘူး။ သူ့မာမီ ပြောတာက သီရိ နေမကောင်းလို့ အိပ်နေတယ်ပဲဖြေတော့ ကျနော်လဲ စိုးရိမ်သွားတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ထပ်ပြီး ဖုန်းဆက်တော့
“ကိုကို့ကို မြင်ရင် ရှက်လို့”
“ဟုတ်တယ်လေ ဆေးခန်းသွားပြီး ဆေးသွင်းလိုက်ရတယ်”
“လူလည်း လမ်းကို မလျှောက်နိုင်ဘူး၊ တကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲနေတာ”
“ဟားးဟားးးးး အဲလောက်တောင် ဖြစ်သွားရတယ်လို့ကွာ”
“ဟင်း မညှာမတာ ခလေးကို”
“သူပဲ ကြမ်းမှ ကြိုက်တယ်ဆိုပြီး”
“သွားး မပြောနဲ့ ရှက်တယ် ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်”
ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားတယ်။ အဲဒီနေ့ကသာ သီရိမပြန်ခဲ့ရင် ကျနော် ရွှေလက်တွဲ ပျော်ခဲ့ရမှာကို ကျနော် မသိလို့ အတင်း မတားခဲ့တာပါ။ သီရိကို ဘာလို့ လွမ်းနေရလဲ ဆိုတာကတော့ နောက်နေ့ သီရိဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်ပြီး တစ်ခေါက်တွေ့တယ်။
“ကိုကို မေ့သွားလို့ သီရိကို ဆေးမဝယ်ပေးလိုက်ရဘူး”
“စိတ်ချရတဲ့နေ့မို့ သီရိ မပြောတာပါ”
“သီရိက အဲဒါကို သိလို့လား”
“ကိုကိုကလဲ ဒီခေတ် မိန်းကလေးပဲ မသိဘဲ နေပါ့မလား”
“အင်း ကိုကို ခရီးထွက်ရအုံးမယ်”
“နေပြည်တော်မှာလေ အလုပ်တွေ ပြန်စမလို့”
“အဲဒါ သီရိကို လာပြောတာ”
“သီရိ နေ့တိုင်း ဖုန်းပြောမှာနော်၊ သီရိ ဘာတွေ လုပ်နေလဲဆိုတာ Facebook ကနေ နေ့တိုင်းကြည့်မှာ”
“သီရိလည်း ကျောင်းတက်ရမယ် မလား”
“အင်း ကိုကို လိုက်ပို့မယ်လေ”
“မပို့နဲ့ ကိုကို… သီရိ ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားမှာ”
“အင်းးးး သီရိ…. ကိုကို အရမ်းချစ်တယ်”
“သီရိ ကိုကို့ကို ချစ်တယ်ပြောကွာ”
“အင်းးးးဟင်းး အာဘွားလေး ပေးချင်လိုက်တာ”
“အေးပါကွာ မနမ်းပါဘူး ဟီးးဟီးး”
ကျနော် အိမ်ပြန်လာပြီး ခရီးထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ရတယ်။ ကျနော်နှင့် သီရိအတူတူ အိပ်ဖူးပြီးပြီမို့လို့ ကျနော် သီရိကို စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်နှင့် သီရိ နီးစပ်ရဖို့အရေး အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ပြီး ငွေရှာရမယ်လေ။ အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ညဆို သူနဲ့ စကားပြောပေါ့။ သီရိ fb ပေါ်မှာတင်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို like လေးပေးပေါ့ဗျာ။
သီရိက ဘလော့ကာ ဖြစ်ချင်တာ။ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာကို ကျနော် သိတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးတယ်ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလေ။ အကောင့်အသစ်တွေ ဖွင့်ပြီး online မှာ စာရေးဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ ကျနော်က အကောင့်အသစ်တော့ သိတယ်။ နောက်ထပ် သူဘာလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး။
သီရိ ပင်ကိုယ်စရိုက်က လွတ်လပ် ပေါ့ပါးပြီး ပျော်ပျော် နေတတ်တာပဲ ကျနော်က သိခဲ့တယ်။ ကျနော်အရင်ကသာ ရှုပ်ပွေခဲ့ပေမယ့် သီရိနှင့် အတူတူ အိပ်ပြီးကတည်းက ဘယ်သူနှင့်မှ မပတ်သက်တော့ဘူး။ မှန်သော သစ္စာပါ။ သီရိကို တကယ်လည်း ချစ်တယ်။
တစ်လလောက် နေပြည်တော်နေပြီး ရန်ကုန်ပြန်လာ။ သီရိနှင့်တွေ့တယ်။ ဟိုတယ်ခေါ်မရတဲ့အတွက် သီရိနှင့် ကျနော်ထပ်ပြီး မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး၊ သူလည်း ကလေးတွေ စာပြရတာတဖက် သင်တန်းတက်ရတာ တဖက်နှင့်ဆိုတော့ သူလည်း အလုပ်မအားပါဘူး။ အိမ်မှာလည်း ကျနော့် မိဘတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် အိမ်ကိုလည်း ခေါ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးလေ။ အပြင်မှာ ခဏတဖြုတ်တော့ တွေ့ရတာပေါ့ဗျာ။
သီရိကြည့်ရတာ fb အပေါ် အရမ်းစွဲလန်းနေတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဖုန်းနှင့်မျက်နှာ ခွာတယ်လို့ မထင်ဘူး။ သူ့ဖုန်းကိုလည်း အမြဲသိမ်းထားတယ်။ ကျနော်လည်း သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို အရမ်းစွက်ဖက်တယ် ထင်မှာစိုးလို့ သိပ်ပြီးမပြောဘူးလေ။ ကျနော်နှင့် သီရိတွဲနေတာကို ကျနော့် အသိုင်းအဝိုင်းက သတိထားမိလာတယ်။ ချစ်ကြိုက်တာနဲ့ ချောင်းဆိုးတာ ကွယ်ဝှက်ထားလို့မှ မရတာလေ။
တစ်နေ့တော့ ကျနော့်ဆီ အကိုဝမ်းကွဲဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်ကို ရောက်လာတယ်။ သူကလည်း ကျနော်တို့အပေါ် အရမ်းကောင်းပါတယ်။
“ဟာ ကိုဇော် ဘယ်က လှည့်လာတာလဲ”
“အော.. ကိစ္စအထူးအထွေ ရှိလို့လား”
“အင်း ပြောရမှာ အားနာတယ်ကွာ”
“အင်း..သိတယ် fb မှာ သူငယ်ချင်းကွ”
“အဲဒါ ကျနော်နှင့် ဘာဆိုင်လို့လဲ”
“ဆိုင်တယ်ကွ..ငါသူနှင့် ရင်းနီးတာ ကြာပေါ့။ အပြင်မှာလည်း တွေ့ဖူးတယ်”
“မင်း fake အကောင့်ဆိုတာ သိလား”
“မသိရင် ငါပြမယ် ငါ့အကောင့်ကိုကြည့်”
ကျနော်လည်း သူ့ဖုန်းကို ယူကြည့်တယ်။
“အဲမှာတွေ့လား သီရိဆိုတဲ့ အကောင့်”
“အင်း တွေ့တယ်၊ အပြာစာအုပ်တွေ ရှယ်ထားတာ”
“အေး အဲဒါ ဘယ်သူမှတ်လဲ”
“အဲဒါ မင်း ကောင်မလေးလေ”
“ဘာဗျ..ကိုဇော်၊ ခင်များ သီရိအပေါ် စော်ကားလွန်းတယ်”
“ဟေ့ကောင် ငါမင်းအစ်ကိုပါကွ၊ မင်းနစ်နာအောင် ငါမလုပ်ဘူး”
“ကိုဇော် မသေချာပဲနှင့် မပြောနှင့်ဗျ”
“ငါပြောရမလား မပြောရမလား စဉ်းစားနေတာ ကြာပြီ၊ မင်းက ယူတော့မယ်ဆိုလို့”
“အဲဒါတော့ မဆိုင်ဘူး ထင်တယ်”
“မင်းစဉ်းစားပေါ့ကွာ.. ကိုယ်ယူမယ့် မိန်းမက အဲလိုအပြာစာအုပ်တွေနှင့် ပျော်နေတယ်ဆိုတာ၊ ယူပြီးမှ သီရိဟာ အဲလိုမှန်းသိရင် မင်းအဖေ အမေတော့ သွားပြီ၊ နောက်ပြီး မင်းအဖေ ရာထူးကလည်း ကြီးတယ်၊ မင်းအမေကလည်း အရှက်ကြီးတယ်.. နှလုံးရောဂါလည်း ရှိတယ်.. မင်းသေချာ စဉ်းစားပေါ့ကွာ.. မင်းငါ့အကောင့် ခဏယူထား သူနဲ့ငါနှင့် fri လုပ်ထားတယ်.. မင်းကြည့်လိုက်ပေါ့”
သူ့အကောင့်ရော ပတ်စ်ဝါ့ပါ ပေးခဲ့တယ်။ ကျနော် သီရိအကောင့်ကို မွှေကြည့်တယ်။ မန့်ထားကြတာတွေ မကြည့်ဝံ့စရာ။ reply ပြန်ထားတဲ့ သီရိမန့်တွေကလည်း ကြောက်လန့်စရာ။ မစားရ ညော်ခံ၊ ပါးစပ်အရသာခံတဲ့ လူတွေအများကြီး။ ကျနော့်ရင်ထဲ အရမ်းခံစားရတယ်။ ကျနော့်ချစ်သူက ပြန်ပြောနေတာတွေ မန့်တွေက ရင်ကွဲလုမတတ် ခံစားရတယ်။
အဲဒါကြောင့် သီရိ သူ့ဖုန်းကို အကိုင်မခံတာဆိုတာ ကျနော် သိလိုက်ပြီ။ ကျနော် သေသေချာချာ သိဖို့ လိုလာပြီ။ ကျနော် စုံစမ်းမယ်။ ကျနော် သီရိကို ဘုရားသွားရအောင် ဖုန်းဆက်တယ်။ သူ့ သင်တန်းလေး မစခင်မှာ သွားရအောင်ပေါ့။
“ရောက်ပြီ သဲ၊ ရောက်တုန်းလေး ဘုရားသွားရအောင်လေ”
“မနက်ဖြန် စောစော သွားရအောင်”
“အိုကေ ကိုကို မနက် ခြောက်နာရီ လာခဲ့မယ်”
ကျနော် မနက်ခြောက်နာရီ ဘုရားသွားဖို့ ချိန်းလိုက်တယ်၊၊ မနက်စောစော ဘုရားမသွားခင် နံနက်စာ ဝင်စားလိုက်ကြသေးတယ်၊ ပြီးမှ ဘုရားပေါ်တက် ဘုရားဖူးပြီးနောက် အောက်ဆင်းရင်း
“ကိုကို သီရိ toilet သွားချင်တယ်.. သင်တန်းကလည်း ကြာမှာမို့”
“သွားလေ သဲ…. ကိုကို အပြင်က စောင့်ပါ့မယ်”
သီရိက အိမ်သာထဲဝင်မယ် အလုပ်မှာ
“သဲ ဘာလို့ အိတ်ယူသွားမှာလဲ၊ ထားခဲ့လိုက်လေ”
သီရိ အိမ်သာထဲဝင်တုန်း အိတ်ဖွင့်ရင်း ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ပတ်ဝါ့က သူ့မွေးနေ့ ထည့်ထားတာ ကျနော်သိတယ်လေ။ ကျနော်သူ့ fb ကိုဖွင့်ပြီး official ကို log out လုပ်လိုက်တော့ fake အကောင့်ကို သွားတွေ့တယ်။ remove လုပ်မထားဘူး၊ ဒါပေမယ့် fake အကောင့်ကို ဖွင့်မရဘူး။ ကျနော်ဖွင့်ကြည့်နေတုန်း သီရိ ရောက်လာတယ်။
“ဟာ ကိုကို.. ဘာလို့ သူများဖုန်း ဖွင့်ကြည့်နေတာလဲ”
“သီရိ ဒီဟာက မင်းအကောင့်တွေလား”
“ဟုတ်တယ်လေ၊ ကိုကို စည်းမရှိဘူး”
“ဘာကွ သီရိ မင်းဘယ်လို မိန်းကလေးလဲ”
“ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုကို ”
“မင်းက မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး fake အကောင့် သုံးရတယ်လို့”
“ခုခေတ် ဘာဆန်းလို့လဲ ကိုကို၊ လူချင်း သိကြတာမှ မဟုတ်ပဲ”
“ဆန်းတယ် သီရိ မင်းကသာ လူချင်းမသိဘူးပြောတာ သိတဲ့လူက လာပြောတယ်ကွ မင်းသိလား”
“သိလည်း ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး”
“ဟာ သီရိရယ် ကိုယ်ယူမယ့် မိန်းကလေးက အဲလိုမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူး”
“မဖြစ်ချင်ရင် လမ်းခွဲလိုက် ကိုကို”
“ဘာကွ.. အဲလိုမပြောနဲ့ သီရိ မင်းကို ငါအရမ်းချစ်တာ၊ မင်းနောက် ဒီအလုပ်မျိုး မလုပ်ပါနဲ့ကွာ”
“ကိုကို သူများလွတ်လပ်ခွင့်ကို မထိခိုက်နဲ့”
“ဘာ သီရိ မင်းဘယ်လို ပြောလိုက်တာလဲကွာ၊ မင်းအကျင့်ကို မပြင်နိုင်ဘူးလား”
“ဟာကွာ မင်းတော်တော် ခေါင်းမာပါလားကွာ”
“မာတယ် ကိုကို မာတယ်၊ ကဲ ဘာမှမပြောနဲ့ သီရိ သင်တန်းသွားတော့မယ်”
“မလိုက်ပို့နဲ့ လိုက်လာရင် အော်လိုက်မှာ”
ပြောရင်း သီရိက တက္ကစီတစ်စီးငှားပြီး ကားပေါ်တက်သွားတော့ ကျနော် စိတ်ညစ်ပြီး ကျန်ခဲ့ရတယ်။ အရမ်းစိတ်ညစ်သွားတယ်။ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ မျောက်သစ်ကိုင်း လွတ်သလိုပါဘဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော့် အသိဖြစ်တဲ့ မမ ခရမ်းပြာကို ကျနော် ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ အဖြေလေး သိရအောင်ပါ။
“ကျနော့်နှင့် သီရိ ကိစ္စလေးပါ မမ”
“မမသိတယ် မောင်လေး အိမ်ထောင်ပြုတာ အချစ်တစ်ခုနဲ့ မလုံလောက်တာ သီရိ နားမလည်တာပါ၊ အသွင်တူမှ အိမ်သူ ဖြစ်နိုင်တယ်လေ၊ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ မောင်လေးတို့အကြောင်း လူသိရင် မောင်လေး မိဘတွေ အရှက်ကွဲမယ်၊ မောင်လေးရှေ့ဆက်မတိုးစေချင်ဘူး၊”
“ကျနော် သီရိကို အရမ်းချစ်တယ် မမရယ်”
“သိပါတယ် မောင်လေးရယ်၊ မမ ပြောတာလဲ စဉ်းစားပေါ့”
ကျနော် အရမ်း စိတ်ညစ်သွားတယ်။ အရမ်းစိတ်ညစ်တော့ ဘာမှ အလုပ်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး၊ ကားကို ဟိုဒီလျှောက်မောင်းပြီး အရက်ဆိုင်ဘက် ခြေလှမ်း ဦးတည်လိုက်တယ်။ တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက် သောက်နေရင်း ဖုန်းကဝင်လာတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်က။ မကိုင်ဘဲ ထားလိုက်တယ်။ သုံးလေးကြိမ် ခေါ်သေးတယ်။ ည ဆယ်နာရီလောက် ဖြစ်လာတယ်။ လူလည်း တော်တော် မူးနေပြီ။ ဖုန်းထပ်ဝင်လာတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုဇော်..
“မဖြစ်ဘူး.. အဘ ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ”
ကျနော် ဆိုင်နာမည် ပြောလိုက်တော့ နာရီဝက်လောက်ကြာပြီး ကိုဇော် ရောက်လာတယ်။ အရက်ဖိုးရှင်းပြီး ကားပေါ်အတင်းတင်ပြီး အိမ်ကိုမောင်းတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ခြေလှမ်း မမှန်တော့တဲ့ ကျနော့်ကို ကိုဇော်ပဲ အိပ်ရာပေါ် တင်ခဲ့တာပဲဗျာ။
မနက်မိုးလင်းတော့ ခေါင်းတွေ မတရား ကိုက်ခဲနေတယ်။ ရေလည်း ငတ်တာကြောင့် ထမင်းစားခန်းးဘက်သွားပြီး ရေသောက်မလို့ သွားတယ်ဗျ။ ဟိုရောက်တော့
“ငါအာလုံး သိပြီးပြီကွ ”
“မင်းနဲ့ သီရိ ကိစ္စလေ”
“အေး ငါပြောမယ်၊ ငါလည်း မဟုတ်တာ မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ မင်းယူမဲ့ ငါ့ချွေးမဟာ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် ဖြစ်ရမယ်”
“ကျနော် သူ့ကို ချစ်တယ် ဖေဖေ၊ သီရိကို ယူမှာ”
“ဒီမှာသား မင်းသီရိကို ယူချင်ရင် ငါသေပြီးမှယူ”
“ငါနှင့် နင့်အဖေတို့ကို အရှက်ရအောင် မလုပ်နဲ့၊ ပြောထားတဲ့ ကြားက သားက သီရိကို ယူရင် မေမေအဆိပ်သောက် သေပစ်မှာ နားလည်လား”
“လောကမှာ ယူစရာ မိန်းမတွေ ပေါလို့ကွာ၊ ငါပေးစားမယ်”
“မယူဘူးဗျာ.. သီရိကလွဲရင် ဘယ်သူ့မှ မယူဘူး”
“အေး နင်သီရိကို ယူရင် ငါလည်း တစ်ခါတည်း အဆိပ်သောက်ပြီးသားပဲ”
“အေး..မင်းဘယ်မှ မသွားပဲ အိမ်မှာပဲနေ ကြားလား”
ကျနော် သီရိဆီ ဖုန်းဆက်တယ်။ သီရိ မကိုင်ဘူး၊ အကြိမ်ကြိမ် ဆက်တယ်၊ သီရိ ဖုန်းပါ ပိတ်တယ်။ ကျနော် ဆောက်တည်ရာ မရဘူးဗျာ။ တချိန်လုံး ဖုန်းခေါ်နေတယ်။ ညရောက်မှ သီရိဆီကို ခေါ်လို့ရတယ်။
“ဒီမှာ ကိုကို နောက်သီရိဆီ ဖုန်းလုံးဝ မဆက်နဲ့၊ မိဘတွေ သဘောမတူတဲ့ ရှင်နဲ့ ဘယ်တော့မှ မယူဘူး”
“သီရိရယ် ကိုကို အရမ်းချစ်တယ်၊ သီရိကို လက်ထပ်လို့ရတဲ့နေ့အထိ ကိုကို သစ္စာရှိရှိ ချစ်နေပါ့မယ်”
“တော်ပါပြီ ကိုကိုရယ် သီရိကို မေ့လိုက်တော့၊ လာလည်း မလာနဲ့တော့၊ သီရိလည်း ကိုကို့ကို မေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်”
ကျနော် မျက်ရည်တွေ စီးကျလာသလို သီရိလည်း ငိုနေလိမ့်မယ်၊ သီရိ ဖုန်းချသွားတယ်။
အချိန်တွေသာ ကြာလာတယ်။ ကျနော် သီရိကို မမေ့နိုင်ဘူး၊ သီရိရဲ့ အကောင့် အစစ်က ကျနော့ကို ဘလော့သွားတယ်။ သီရိက စိတ်ညစ်ပြီး အကောင့်အစစ်ကို မသုံးတော့ပဲ fake အကောင့်မှာ ပျော်နေတယ်။
အခုတော့ ကျနော်လည်း fake အကောင့်လေး သုံးရင်း စာတွေ ရေးလာတယ်။ အခု သီရိနှင့် fri ဖြစ်နေပြီ။ ညီမလေး တစ်ယောက်လို သဘောထားတယ်လို့ ပြောရင်း သူ့ကိုပြောကြဆိုကြနဲ့ သူမန့်တာတွေကို ကြည့်နေမိတယ်။ ရင်နာနာနဲ့ သူ့အကောင့်လေး မီးစိမ်းလာတာကိုကြည့်ရင်း လွမ်းနေရတာပေါ့ဗျာ။
ကျနော် သီရိကို အရမ်းချစ်တယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာ သူနှင့် လက်ထပ်နိုင်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်တယ်။ ကျနော် ခင်များကို အရမ်းချစ်တယ် သီရိရယ် ……။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 15,108
အိပ်မက်နတ်သိုင်းကျမ်း နှင့် လှကလျာ